July Dream: January 2008
သွေးလှူ၇င် ဘာတွေ စစ်ပေးတာလဲ ပြောပြပါလား.. စီ ပိုးတွေ ဘာတွေရော စစ်လား မသိဘူး နော်.. ခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ သွေးသွင်းတာကနေ စီပိုးကူးတာ ခေတ်စားနေသလားလို့ပါ... ဆိုပြီး မေးထားတာလေး တွေ့လို့ ဒီပို့စ်လေးကို တင်လိုက်တာပါ။
သွေးလှူတာက ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ သွေးဘဏ်မှာ မိမိသဘောအလျှောက် သွေးလှူတာနဲ့ အရေးပေါ် သွေးလိုအပ်လို့ လူနာရှင်က အကူအညီတောင်းလို့ သွေးလှူတာ ဆိုပြီး ခွဲထားနိုင်ပါတယ်။ မိမိသဘောနဲ့ လှူတဲ့သွေးကိုတော့ အရင်ဦးဆုံး သွေးပေါင်ချိန် ဟေမိုဂလိုဗင် သွေးအမျိုးအစား စတာတွေပဲ စစ်ပါတယ်။ ရောဂါရှိမရှိကို မစစ်ပဲ သွေးတစ်အိတ်စာကို အရင် ထုတ်ယူထားပါတယ်။ ပြီးမှ အဲဒီသွေးထဲက နမူနာကို ဓါတ်ခွဲခန်းပို့ပြီး ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စစ်ပါတယ်။ သွေးမှာ ရောဂါပိုးတွေ မရှိဘူးဆိုရင် အအေးခန်းမှာ စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ နောက်မှ လိုအပ်တဲ့ လူနာကို လိုအပ်သလို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ရောဂါပိုး ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝ မသုံးပဲ လွင့်ပစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လွင့်ပစ်ရတဲ့အတွက် သွေးအိတ်ခတွေ၊ သွေးစစ်ခတွေကို အမျိုးသားသွေးဘဏ်က ကျခံ ဆုံးရှုံးရပါတယ်။ လွင့်ပစ်တဲ့ အပိုင်းကိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လို လုပ်သလဲ မသိပေမယ့် စင်္ကာပူမှာတော့ စနစ်တကျ ဓါတ်ပေါင်းဖို ထဲကိုထည့်ပြီး ဓါတုဗေဒနည်းနဲ့ အချိန်ပေး ဖျက်ဆီးရပါတယ်။ သွေးအိတ်တစ်အိတ်ကို ဖျက်ဆီးရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က စင်္ကာပူဒေါ်လာ ရာဂဏန်းလောက် ကုန်ကျပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရောဂါရှိမယ်လို့ သံသယရှိရင် သွေးမလှူခိုင်းကြတာပါ။
အရေးပေါ် သွေးလိုလို့ လူနာရှင်က အကူအညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာ သွားရောက်လှူဒါန်းတဲ့ သွေးကို ထပ်ပြီး ၂ မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုက ရှေ့က ပြောသလို သွေးကို အရင်ထုတ်ထားပြီးမှ ရောဂါစစ်တာပါ။ နောက်တစ်မျိုးက လိုအပ်တဲ့ သွေးကို မယူခင်ကတည်းက ရောဂါပိုးရှိမရှိကို သွေးနမူနာ နည်းနည်းလေး ယူပြီး ကြိုတင်စစ်တာပါ။ ရောဂါပိုး စစ်တဲ့နေရာမှာလည်း ဆေးရုံ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကြာမြင့်ချိန် မတူကြပါဘူး။ အမျိုးသား သွေးဘဏ်မှာဆိုရင် ၄၅ မိနစ်ကနေ ၂ နာရီ ကြား ကြာတတ်ပါတယ်။ အာရှတော်ဝင်ကတော့ မနက်က ယူထားတဲ့သွေးကို တစ်နေ့ကုန် စစ်ပြီး နောက်တစ်နေ့မှ အဖြေ ပြန်ထွက်ပြန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလောက် အချိန်ယူတာလဲ မေးကြည့်တော့ ၂ ခါပြန်စစ်နေလို့ပါတဲ့။ တခါတလေမှာ လူနာရဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး သွေးအမျိုးအစား မှန်တယ် လူနာရဲ့သွေးနဲ့ တည့်တယ်ဆိုတာနဲ့ သွေးမှာ ရောဂါစစ်မနေတော့ပဲ တိုက်ရိုက် သွင်းရတဲ့ကေ့စ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ လူနာရဲ့အသက်ကို လုနေတဲ့အချိန်မှာ နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေး ဆိုပြီး လုပ်ကြရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သွေးလှူရှင်ရဲ့ နေရာက အလွန်ကို အရေးပါ ပါတယ်။ သူရဲ့ အမူအကျင့်တွေဟာ စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားမှာ မရှိရင် လူနာရဲ့ ဘ၀ရှေ့ရေးမှာ ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးလှူရှင်အနေနဲ့ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ဆင်ခြင် သုံးသပ်ပြီးမှ သွေးလှူဖို့ကို တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပုံမှန်သွေးလှူရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက် မိမိစိတ်ဆင်ရိုင်းကို လွတ်မပေးပဲ ချွန်းအုပ်သင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် နေထိုင်သင့်ပါတယ်။
အဲဒီလို သွေးစစ် မလား မစစ်ဘူးလားဆိုတာကို လူနာရှင်တွေဘက်က ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိမယ်လို့လည်း မမြင်မိပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ သွေးလှူရှင်အနေနဲ့လည်း သွေးစစ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုခွင့်မရှိပါဘူး။ လူနာရဲ့ ရောဂါအနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး တက်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆေးဘက်ပညာရှင်တွေကပဲ ဆုံးဖြတ်ကြမှာပါ။ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်တဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကလည်း လူနာရဲ့အသက်ကို အဆုံးအဖြတ် ပေးပြန်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ပေမယ့် နောက်က အကောင်အထည် ဖော်တဲ့အချိန်မှာ နှောင့်နှေးပြီး ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်း ကြုံခဲ့ရသလို မူလ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုက မှားနေတဲ့အတွက် အဖတ်ဆယ် မရတာတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ မမှားသောရှေ့နေ မသေသော ဆေးသမား ဆိုသလိုပေါ့။
စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေးလို့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေ ပြူးနေအောင် ချိတ်ထားတဲ့ ဆေးရုံကြီးတွေမှာလည်း လူနာရှင်ကပဲ သွေးစစ်ခ သွေးအိတ်ခ ပေးဆောင်ရပါတယ်။ ပြင်ပက ဆေးရုံကြီးတွေမှာလည်း လူနာရှင်ကပဲ ပေးဆောင်ရပါတယ်။ အရမ်းကို နွမ်းပါးတဲ့လူနာတွေအတွက် တခါတလေမှာ သွေးစစ်ခကို ပေးဆောင်ခိုင်းခြင်း မရှိတာကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နွမ်းပါးတယ် ဆိုတာရဲ့ နောက်မှ အပြောအဆို ခံရမှုတွေ၊ သိမ်ငယ်မှုတွေ အများကြီးကို တောက်လျှောက် ခံစားရမှာပါ။ အစိုးရ ဆေးရုံကြီးတွေက နိုင်ငံတကာမှ လှူဒါန်းထားတဲ့ အရာတွေကို အသုံးပြုနေပေမယ့် လူနာတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်စုံအောင် မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် စရိတ်မျှပေးဆိုပြီး သွေးစစ်ခ သွေးအိတ်ခကို ပိုက်ဆံ ပြန်ကောက်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပြင်ပဆေးရုံ အထူးကုဆေးခန်းတွေလောက်တော့ ဈေးမများပါဘူး။ ကျွန်တော် သိသလောက် အဲဒီပြင်ပက ဆေးရုံကြီးတွေမှာ သွေးစစ်ခက မြန်မာငွေ ၃ သောင်းကျော်လောက် ကုန်ကျပါတယ်။ အစိုးရ ဆေးရုံတွေမှာတော့ ကျပ် ၁ သောင်း ပတ်ဝန်းကျင် ပေးရပါတယ်။
နားမလည်နိုင်အောင်ပဲ အလှူအတန်း ရက်ရောပါတယ် စေတနာဖြူစင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ရွှေမြန်မာတွေ သွေးလှူဒါန်းတဲ့ဓလေ့ အရမ်းနည်းနေပါတယ်။ ပညာပေးစည်းရုံးမှု အားနည်းတာကြောင့်လို့ မြင်မိပါတယ်။ အမျိုးသားသွေးဘဏ်မှာ တစ်နေ့လုံးနေမှ သွေးအလုံးရေ ၁၀၀ ကျော်လောက်ပဲ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်် ဆေးရုံတစ်ခုထဲက သွေးလိုအပ်ချက်တင် တစ်နေ့ကို သွေးအလုံး ၂၀၀ ကျော် လိုပါတယ်။ ဆေးရုံမှာ ပုံမှန် သွေးသွင်းကုသနေရတဲ့ သွေးရောဂါရှင်တွေ ရှိသလို ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် အရေးပေါ် သွေးလိုတဲ့ လူနာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာ ဆေးရုံကြီးပေါင်း ၅၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးရုံတွေမှာ သွေးလိုအပ်မှုက နေ့စဉ် ရှိနေပါတယ်။ မီဒီယာတွေမှာ တင်ပြမှု မရှိလို့သာ နေ့စဉ် ကြွေလွင့်နေရတဲ့ လူ့အသက်တွေ မသိရတာပါ။ သွေးဆိုတာ လူ့အသက် ကယ်တဲ့နေရာမှာ အစားထိုးလို့ မရသေးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အစားထိုးလို့ မရတဲ့သွေး လိုအပ်ချိန်မှာ မရတဲ့အခါ လူ့လောကကို အချိန်မတိုင်ခင် သက်တမ်းစေ့ မနေရခင် နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာပေးကြရပါတယ်။
သွေးမှာ ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စစ်တဲ့အခါမှာ ဘာတွေ စစ်သလဲဆိုတော့ အေ ဘီ စီ နဲ့ ကာလသားရောဂါပိုးပဲ စစ်ပါတယ်။ အေအိုက်ဒီအက်စ် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ရှိမရှိ၊ အသည်း ဘီပိုး စီပိုး ရှိမရှိ စစ်ပါတယ်။ စီ ပိုး ရှိမရှိကို စစ်ရတဲ့အချိန်က အကြာဆုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့် အရေးပေါ် သွေးလိုနေတဲ့အချိန်မှာ စီ ပိုး စစ်မစစ်ဆိုတာကို အသေအချာ အာမ မခံနိုင်ပါဘူး။ အာရှတော်ဝင်က အချိန်အကြာကြီးယူတာ စီပိုးကို သေချာ စစ်နေရလို့ပါလို့ ဆင်ခြေပေးဖူးပါတယ်။ သွေးလှူဒါန်းမှု စုစုပေါင်းမှာ စီပိုးစစ်တဲ့နှုန်းက ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ စီပိုး စစ်လေ့ရှိတဲ့အတွက် စီပိုးကူးစက်နှုန်းက သွေးကတစ်ဆင့် ကူးဆက်မှုကြောင့်လို့ တစ်ထစ်ချ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ အသည်းစီပိုး ကူးဆက်တဲ့ နည်းလမ်းက အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး လိုပါပဲ။ လိင်ဆက်ဆံမှုကတဆင့် ကူးပါသေးတယ်။ ဆေးထိုးအပ်တွေကနေ ကူးပါတယ်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ပိုးရဲ့ ကူးစက်နှုန်းထက် စီပိုးတွေရဲ့ ကူးစက်နှုန်းက ပိုမြင့်တဲ့အတွက် အပျော်အပါး လိုက်စားတဲ့သူတွေ အေမကိုက်လို့ ၀မ်းသာနေချိန်မှာ စီပိုးထိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ စီပိုးကူးစက်နှုန်း မြင့်နေရတာ သွေးသွင်းကုသမှု တစ်ခုတည်းက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော် မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 9:41 AM 1 comment:
(For me, it is true. Thanks sister TommyGirl for sharing)
Posted by JulyDream at 3:27 PM No comments:
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှာ ဗျောက်အိုးတွေ ဖောက်တဲ့ဓလေ့နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး နောက်ခံ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ရှိပါတယ်။ အခုပို့စ်မှာ ဒီပုံပြင်လေးကို ပြောပါမယ်။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက မြင့်မားလှတဲ့ တောင်တန်းတွေရဲ့ ထိပ်မှာ ၀ါးရုံပင်တွေ အပြိုင်းအရိုင်း ပေါက်နေကြပါတယ်။ အဲဒီ ၀ါးရုံပင်တွေပေါ်မှာ ခြေထောက်တစ်ဖက်ပဲ ရှိတဲ့ တောင်မှင်စာလေးတွေ နေထိုင်ကြပါတယ်။ တောင်မှင်စာလေးတွေရဲ့ အရပ်အမြင့်က လူတွေရဲ့ ခြေထောက်လောက်ပဲ မြင့်ပါတယ်။ ဘွန်ဇိုင်းမျိုး မှင်စာ ဂျပုလေးတွေပေါ့။ တောင်မှင်စာလေးတွေက အရပ်က ပုသလို အကျင့်ကလည်း ယုတ်ပါတယ်။ သူတို့နယ်ကို ဖြတ်သွားတဲ့ လူတွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ စားစရာမှန်သမျှကို အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့် လုယူတတ်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ တခြားနယ်က ဈေးသည်ကြီးတစ်ဦးဟာ စားစရာတွေ ခြင်းနဲ့အပြည့် ကျောပိုးသယ်လာပြီး နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်အတွက် ဈေးရောင်းထွက်လာပါတယ်။ မှင်စာတွေနေတဲ့ တောင်ကို ညနေစောင်းအချိန် ဖြတ်သန်းမိတဲ့အခါမှာ မှင်စာတွေက ၀ါးပင်တွေပေါ်က ဆင်းလာပြီး ဈေးသည်ကြီးရဲ့ ခြင်းထဲက စားစရာတွေကို အပြိုင်အဆိုင် လုယူပါတော့တယ်။ မျောက်သာသာပဲရှိတဲ့ မှင်စာတွေကို မကြောက်တဲ့ ဈေးသည်ကြီးက မှင်စာတွေကို လိုက်ဖမ်းပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ မှင်စာတစ်ကောင် ဖမ်းမိသွားပါတယ်။ ဖမ်းမိတဲ့ မှင်စာကို တရားရုံးမှာ တရားစွဲ တိုင်ကြားဖို့ဆိုပြီး ကြိုးတုပ် ခြင်းထဲထည့် ခေါ်လာပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ တောင်အောက်က မြို့ကလေးနားကို ရောက်တော့ အတော်လေး မိုးချုပ်နေပါပြီ။ မြို့အ၀င် တောအစပ်မှာ လူငယ်တစ်စုက မီးလှုံနေကြပါတယ်။ တောင်မှင်စာကို ကြိုးတုပ်ခေါ်လာတဲ့ ဈေးသည်ကြီးကို တွေ့တော့ လူငယ်တွေက အော်ပြောကြပါတယ်။ အကိုရေ... အဲဒီ အကောင်ကို အမြန်လွှတ်လိုက်ပါဗျို့။ ဒီကောင်တွေက တောင်အောက်ကို ဆင်းဆင်းလာပြီး လူတွေဆီက အစားအစာတွေ လုတတ်တယ်။ ဒီကောင်ကို ထိမိ ကိုင်မိတဲ့သူက ကိုယ်ပူလိုက် အေးလိုက်ဖြစ်ပြီး အဖျားဝင်တတ်ပါတယ် ဆိုပြီး ပြောကြပါတယ်။ ဈေးသည်ကြီးလည်း တဖြည်းဖြည်း ချမ်းအေးပြီး ဖျားလာလို့ လူငယ်တွေနဲ့အတူ မီးဝင်လှုံနေလိုက်ပါတယ်။ လူငယ်လေးတစ်ဦးက ဈေးသည်ကြီး အချမ်းပြေစေဖို့ ထင်းချောင်းတွေ မကျန်တော့တဲ့ မီးပုံထဲကို မီးမသေအောင်ဆိုပြီး အနီးတ၀ိုက် မြေပြင်ပေါ်က ၀ါးလုံးအခြောက်တွေ ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ သိပ်မကြာတဲ့အချိန်မှာ မီးပုံဘေးမှာ မီးလှုံနေတဲ့လူတွေရဲ့ ပတ်ပတ်လည်က အပင်တွေအပေါ်မှာ တောင်မှင်စာတွေ နေရာယူထားတာကို လူငယ်တွေ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ မီးလှုံနေတဲ့ လူအားလုံး တောင်မှင်စာတွေနဲ့ မထိမိအောင်ဆိုပြီး ထပြေးကြပါလေရော။
တောင်မှင်စာတွေက အပင်ပေါ်က ဆင်းလာပြီး တောင်းထဲထည့် အဖမ်းခံထားရတဲ့ မှင်စာရှိရာ မီးပုံနားကို တဖြည်းဖြည်း ကပ်လာကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မီးပုံထဲက ၀ါးလုံးခြောက်တွေ မီးလောင်ပြီး တဖြောက်ဖြောက် ထပေါက်ပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ မီးပုံနား ရောက်နေတဲ့ မှင်စာတွေလည်း ဖမ်းခံထားရတဲ့ အကောင်ကို ထားခဲ့ပြီး ကြောက်လန့်တကြား ၀ရုန်းသုန်းကား ထပြေးကြပါလေရော။ အဲဒီလို တဖျောက်ဖျောက် ပေါက်ကွဲတဲ့ အသံကြောင့် မှင်စာတွေ ထွက်ပြေးကုန်တာကို မြင်လိုက်တဲ့ လူငယ်တွေဟာ နောက်နောင်တွေမှာ တောင်မှင်စာတွေ ရွာထဲမ၀င်အောင် လူတွေအနားမကပ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိရှိသွား ကြပါတော့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တောင်မှင်စာတွေ မလာအောင် ၀ါးလုံးခြောက်တွေကို မီးရှို့ပြီး ဖောက်ကြပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကာလမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ မှင်စာတွေရဲ့ အနှောင့်အယှက် မရှိအောင်၊ မြို့ရွာအိုးအိမ် လုံခြုံမှုရှိအောင် ဆိုပြီး ဗျောက်အိုးတွေကို အတွဲလိုက် ဖောက်တဲ့ဓလေ့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ ပါတော့တယ် ခင်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 4:44 PM No comments:
Posted by JulyDream at 8:48 PM 1 comment:
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ တံမြက်စည်းတွေကို ဘာကြောင့် ၀ှက်ထားရသလဲ ဆိုတာကို အခုပုံပြင်က ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အိုးမင်လို့ ခေါ်တဲ့ ကုန်သည်တစ်ယောက်ဟာ ရေလမ်းခရီးကို အသုံးပြုပြီး ကုန်စည်တွေကို ကူးသန်းရောင်းဝယ်နေပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ အဲဒီလို သွားလာနေတုန်း မုန်တိုင်းမိပါလေရော။ မုန်တိုင်းက ပြင်းလွန်းလို့ လှေကို ထိန်းလို့မရခဲ့ပါဘူး။ မိုးသက်မုန်တိုင်း ငြိမ်သက်သွားချိန်မှာတော့ သူရဲ့လှေဟာ ကျွန်းတစ်ကျွန်းရဲ့ သောင်ပြင်ပေါ်ကို ရောက်နေပါပြီ။ လှေလည်း အတော်လေး ပျက်စီးသွားပါတယ်။
စိတ်ပျက်အားငယ်နဲ့တဲ့ အိုးမင်ဟာ သောင်ပြင်ပေါ်မှာ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်သွားနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်းရဲ့ အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ ချင်ဟုန်ကျွင်း ရောက်လာပြီး သူ့ရဲ့ စံနန်းတော်မှာ လာရောက်တည်းခိုဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်းကြီးသခင်ဟာ အိုးမင်ကို စံနန်းတော်ကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး နွေးထွေးပျူငှာစွာ ဧည့်ခံပါတယ်။ ပြီးတော့ သူရဲ့ ဘဏ္ဍာတိုက်ထဲကို ခေါ်သွားပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွှေငွေ၊ ကျောက်မြတ်ရတနာ စတာတွေကို ဧည့်သည်တော်ကြီးအနေနဲ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ယူနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ ရတနာပစ္စည်းတွေ၊ ရွှေငွေတွေကြားမှာ လောဘဇော တက်နေတဲ့ အိုးမင်တစ်ယောက် ဘာကိုယူလို့ ယူရမှန်း မဝေခွဲနိုင်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီလိုအချိန်မှာ လက်ဖက်ရည် လာရောက်တည်ခင်းတဲ့ အဘိုးအိုတစ်ဦးက ဧည့်သည်တော်ကြီး လက်ဖက်ရည် သုံးဆောင်တော်မူပါ။ ပြီးမှပဲ လက်ဆောင်တွေ ဆက်လက် ရွေးချယ်ယူပါ။ ဒီနေရာမှာ ရီယွမ်ဟာ တန်ဖိုးအရှိဆုံး ရတနာတစ်ပါးပါပဲလို့ ပြောသွားပါတယ်။ လက်ဆောင်တွေ ရွေးနေတဲ့ ကုန်သည်ကြီးအိုးမင်လည်း အနည်းငယ် တွေဝေသွားပါတယ်။ ရီယွမ်ဆိုတဲ့ ဘာမှန်းမသိသေးတဲ့ ရတနာကို သူလိုချင်သွားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်းကြီးသခင်ကို ရီယွမ်ကိုပဲ လိုချင်ကြောင်း သွားရောက် ပြောကြားပါတယ်။ ကျွန်းကြီးသခင်က မိန်းမပျိုလေး ရီယွမ်ကို ရှေ့တော်မှောက် ခေါ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ အစေခံလေးဖြစ်တဲ့ ရီယွမ်ကို ဧည့်သည်တော်ကြီးနဲ့ လက်ဆက်ပေးပြီး မင်္ဂလာဦး လက်ဆောင်အဖြစ် ရွှေငွေ ရတနာပစ္စည်းတွေကို သေတ္တာတစ်လုံးမှာ အပြည့်ထည့် သော့ခတ်ပြီး သော့ကို ရီယွမ်ကို ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လှေတစ်စင်းကို စီမံပေးပြီး ဧည့်သည်တော်ကို အိမ်ပြန်ခရီး စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်လမ်းလုံး ကုန်သည်အိုးမင်ကတော့ မိန်းမဖြစ်သူ ရီယွမ်ဆီက ရတနာသေတ္တာကို အရယူဖို့ အပိုင်ကြံနေပါတယ်။ ကြင်စဦးကာလမှာတော့ မိန်းမဖြစ်သူကို ဂရုတစိုက် ကြင်နာပြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ အိုးမင်ရဲ့အချစ်ကို ယုံကြည်သက်ဝင်လာတဲ့ ရီယွမ်ဟာ ရတနာသေတ္တာရဲ့ သော့ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ဇာတိပြလာတဲ့ အိုးမင်ဟာ ရီယွမ်ကို ဇနီးမယားအဖြစ် တန်ဖိုးမထားတော့ပဲ အိမ်စေတစ်ယောက်လို ပြောင်းလဲ ဆက်ဆံလာခဲ့ပါတယ်။ သနားစရာ ကောင်းတဲ့ ရီယွမ်လေးဟာ မိုးလင်းမိုးချုပ် အိမ်အလုပ်တွေကို တကုပ်ကုပ် လုပ်ရတဲ့အပြင် အိုးမင်ရဲ့ ဆူပူညှင်းဆဲ နှိပ်စက် ရိုက်နှက်ခြင်းကိုလည်း ခံရပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးကာလရဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ရီယွမ်ဟာ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ခန်းထဲကနေ လှမ်းကြည့်နေတဲ့ အိုးမင်က ရီယွမ်ကို ဘယ်လို အပြစ်ရှာပြီး ရိုက်နှက်ရမလဲ ဆိုတာကို တွေးတောနေပါတယ်။ နောက်တော့ လင်းကြက်တွန်မှ အိပ်ရာထရမလားဆိုပြီး ဆူပူ ရိုက်နှက်ပါတော့တယ်။ ရီယွမ်လေးလဲ နာလွန်းလို့ ဟိုဟိုဒီဒီ ပြေးရှာတာပေါ့။ အဲဒီလို ထွက်ပြေးရကောင်းမလား ဆိုပြီး အိုးမင်ကလည်း ထပ်ချပ်မကွာလိုက်ပြီး ရိုက်နှက်တာပေါ့။ နောက်ဆုံး ခြံဝင်းထဲမှာ ထောင်ထားတဲ့ တံမြက်စည်းနားကို ရောက်တော့ ရီယွမ်လည်း တံမြက်စည်းထဲကို ၀င်ပြီး ပုန်းနေပါတော့တယ်။ ထူးဆန်းစွာပဲ ရီယွမ်လေးဟာ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွားပါတော့တယ်။ သိပ်မကြာတဲ့အချိန်မှာပဲ ရီယွမ်နဲ့အတူ ပါလာတဲ့ ရွှေငွေရတနာတွေဟာ အိမ်ထဲကနေ တန်းစီထွက်လာပြီး တံမြက်စည်းထဲကို ၀င်ရောက် ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ အဲဒီမြင်ကွင်းကို အံ့အားသင့်နေတဲ့ အိုးမင် တစ်ယောက်တော့ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ရူးသွားရှာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က စပြီး တံမြက်စည်းနဲ့ လှည်းသလို စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ ပျောက်ကွယ် မသွားရအောင်ဆိုပြီး နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီးတာနဲ့ တံမြက်စည်းတွေကို လူမြင်ကွင်းမှာ မထားပဲ ၀ှက်ထားတဲ့ဓလေ့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
Posted by JulyDream at 10:37 PM 1 comment:
Posted by JulyDream at 10:10 PM No comments:
တရုတ်လူမျိုးတွေ နှစ်သစ်ကူးမှာ အနီရောင်ကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသလဲဆိုတဲ့ ပုံပြင် ဇာတ်လမ်းလေးကို ပြောပြပါမယ်။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ မြွေဆိုးကြီးတွေ ကျားဆိုးကြီးတွေ စတဲ့ သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ အဲဒီအကောင်ဆိုးတွေထဲမှာ နယန်လို့ခေါ်တဲ့ အကောင်ဆိုးကြီး တစ်ကောင်လည်း ရှိပါတယ်။ သူက တရုတ်နှစ်ကူးပွဲတော်ကာလ ညပိုင်းတွေကျမှ တစ်ခါပြန်ပေါ်လာပြီး လူသားတွေကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် စားသောက်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ပြန်တယ်။ ရွာသားတွေက နယန်ကြီး ရောက်လာမှာကို တွေးပူပြီး နှစ်ကူးမှာ မပျော်ရွှင်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ရွာက အဘိုးအိုတစ်ဦးက အခြားရွာသားတွေ အားလုံးအစား နယန်ကြီးမှာ သွားပြီး အစားခံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ နယန်ကြီး ရှိရာနေရာကို တစ်ဦးတည်း ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ နယန်ကြီးကိုတွေ့တော့ ဒီနှစ်အတွက် သူ့ကို စားသောက်ပါ။ သူ့ကို စားပြီးရင် ရွာသားတွေကို ဒီနှစ်မှာ ထပ်ပြီး အနှောင့်အယှက် မပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ နယန်ကြီးက သူ့ကိုပဲ စားမယ်လုပ်တော့ သူက ခဏလောက်နေပါအုံး။ ၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ အရင်ချွတ်ပါရစေအုံးပေါ့။ ဒါမှ ပိုပြီး စားလို့ကောင်းမယ်ပေါ့ လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ အပေါ်က ၀တ်လာတဲ့ ၀တ်ရုံရှည်ကြီးကို အရင်ချွတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကဲ... ရပြီ စားတော့လို့ ပြောပါလေရော။ အဲဒီအချိန်မှာ အကောင်ကြီးလည်း ကြောက်လန့်တကြား အော်ဟစ်ပြီး ထွက်ပြေးပါလေရော။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဖိုးကြီးက အထဲမှာ ၀တ်ထားတဲ့ အောက်ခံအ၀တ်က အနီရောင်လေးဖြစ်နေပြီး နယန်ဆိုတဲ့ အကောင်ကြီးက အနီရောင်ကို အတော်မုန်းတီး ကြောက်ရွံ့ပါတယ်။ အဖိုးကြီးလည်း အဲဒီတော့မှ နယန်ကြီး အနီရောင်ကို ကြောက်မှန်း သိသွားပါတော့တယ်။
ရွာသားတွေကတော့ ရွာထဲကို နယန်ကြီး ညဘက်မှာ ရောက်မလာတာကို အံအားသင့်နေကြပါတယ်။ အရင်ညတွေကဆို ရွာထဲကို ၀င်လာပြီး သောင်းကျန်းနေကြ နယန်ကြီး အခုညတော့ ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေတယ်လေ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ နယန်ကြီးကို ခွစီးပြီး ရွာလမ်းမအတိုင်း ၀င်လာတဲ့ အဖိုးအိုကြီးကို ရွာသားတွေက အိမ်ထဲကနေ ပြတင်းပေါက်တွေကနေ တဆင့် ချောင်းကြည့်ပြီး အံ့အားသင့်နေကြပါတယ်။ အဖိုးကြီးက နယန်ကြီးက အနီရောင်ကို အသေကြောက်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် နှစ်သစ်ကူးကာလတွေမှာ အိမ်ရှေ့တံခါးတွေမှာ အနီရောင်စက္ကူတွေ ကပ်ထားပြီး နယန်ကြီး မလာအောင် ခြောက်လှန့် မောင်းထုတ်နိုင်ကြောင်း လိုက်လံ နှိုးဆော်ပါတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်က စပြီး တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလ မရောက်ခင်မှာ အိမ်ရှေ့တံခါးတွေမှာ အနီရောင်စက္ကူတွေ ကပ်ထားကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အနီရောင်စက္ကူတွေပေါ်မှာ မင်္ဂလာရှိတဲ့ နိမိတ်ကောင်းတဲ့ စာသားတွေပါ အလှဆင် ရေးသားလာပါတယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် နှစ်ကြောင်းတွဲ ကဗျာလင်္ကာတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ အင်း... အဲဒါဇာတ်လမ်းလေးကတော့ နှစ်သစ်ကူးမှာ အနီရောင်ကို ဘာလို့ သုံးသလဲဆိုတဲ့ နောက်ခံပုံပြင်လေးပါပဲ ခင်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 10:08 PM2comments:
Posted by JulyDream at 5:37 PM2comments:
တရုတ်နှစ်ကူးလေး နီးလာတော့ တရုတ်နှစ်ကူးအကြောင်းလေး ရေးပါအုံးမယ်။ သိပြီးသားတွေ ဖြစ်နိုင်သလို မသိသေးတာတွေလည်း ရှိနိုင်တာမို့ အတတ်နိုင်ဆုံး စုံလင်အောင် ရေးသွားပါမယ်။ အခု ဒီနှစ် ၂၀၀၈ မှာ တရုတ်နှစ်ကူးက ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့နဲ့ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်ပါမယ်။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေအတွက် အလွန်ကိုအရေးပါတဲ့ ပွဲတော်တစ်ခုပါ။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီနှစ်ကူးပွဲတော်မှာ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းလေးတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ အရင်တင်ပြချင်ပါတယ်။
နှစ်ကူးပွဲတော် မရောက်ခင်မှာ တရုတ်လူမျိုးတွေ အိမ်တွင်းအိမ်အပြင်တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ်။ အိမ်အတွင်းရှိ ပရိဘောဂကအစ ပန်းကန်ခွက်ယောက်အဆုံး သန်စင်ဆေးကြောကြပါတယ်။ အိမ်ရဲ့ အခန်းထောင့်တွေတိုင်းမှာ ပင့်ကူအိမ်တွေတောင်မရှိပဲ သန့်ရှင်းပြီး အမှိုက်ကင်းစင်နေရပါမယ်။ အဲဒီလို တစ်အိမ်လုံး သန့်ရှင်းပြီးတဲ့အခါကျရင် တံမြက်စည်းတွေ အားလုံးကို ၀ှက်ထားရပါတယ်။ စည်းစိမ်ဓနတွေ တံမြက်စည်း လှည်းသလို အဝေးကို မရောက်သွားရအောင် တံမြက်စည်းတွေကို နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ ၀ှက်ထားရပါတယ်။
နှစ်ကူးပွဲတော်အတွင်းမှာ မိသားစု မျက်နှာစုံညီ ထမင်းစားပွဲကို ကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။ မိသားစုကို အလေးထားတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေအတွက် မိသားစု ပြန်လည်ပေါင်းစည်းတဲ့ အထိမ်းအမှတ် ညစာစားပွဲဟာ အလွန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး အိမ်ခွဲနေတဲ့ သားသမီးတွေ၊ နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်နေတဲ့ သားသမီးတွေ အကုန်လုံး အဲဒီအချိန်မှာ မိဘအိမ်ကို ပြန်လာလေ့ရှိပြီး မိသားစု ညစာစားပွဲကို တက်ရောက်ကြပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးမယ့်ညမှာ တစ်ညလုံး မအိပ်ပဲ နှစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းသွားတာကို ထိုင်စောင့်တဲ့ ဓလေ့လဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို တစ်ညလုံး မအိပ်ပဲ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုတဲ့အတွက် လူကြီးမိဘတွေ ကျန်းမာပြီး အသက်ရှည်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ရှေးအစဉ်အလာအရ ကလေးတွေဟာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မှာ အန်ပေါင်း (စာအိတ်အနီ) ကို ရရှိကြပါတယ်။ ကလေးတွေက အဲဒီ အန်ပေါင်းကို အိပ်ရာထဲက ခေါင်းအုံးအောက်မှာ တစ်ည သိမ်းထားရပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ကျမှ အဲဒီ အန်ပေါင်းအိတ်ကို ဖွင့်ဖေါက်ရပါတယ်။ အန်ပေါင်းပေးတဲ့ ဓလေ့အရ အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့ အကြီးတွေက အိမ်ထောင်မရှိသေးတဲ့ ငယ်ရွယ်သူများကို ပေးရပါတယ်။ အိမ်ထောင်မရှိတဲ့ လူပျိူလူလွတ်တွေဆီက တောင်းခံနိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ အန်ပေါင်းထဲမှာ ပါတဲ့ ပိုက်ဆံပမာဏက အဓိက မကျပါဘူး။ အဓိက အန်ပေါင်းဆိုတဲ့ စာအိတ်အနီလေး ပေးခြင်းအားဖြင့် အန်ပေါင်းရသူ ကံကောင်းမယ် ကျန်းမာမယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီအရ နဂါးဆိုတာ မိုးရွာခြင်းကို ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ တန်ခိုးရှင်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ နှစ်ကူးမှာ နဂါးအက ကခြင်းအားဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး မိုးလေ၀သ ကောင်းမွန်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ခြင်္သေ့အက ကခြင်းအားဖြင့် မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ထွက်ပြေးပြီး လာဘ်လာဘများ ကောင်းမွန်မယ်လို့ ယုံကြည် ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်နှစ်ကူးမှာ နဂါးအက ခြင်္သေ့အကတွေကို မြင်တွေ့ရတာပါ။
နှစ်ကူးမှာ ဗြောက်အိုးတွေကို အတွဲလိုက် ဗောက်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ဗြောက်အိုးသံကြောင့် သရဲတွေ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ လန့်ပြီး ထွက်ပြေးမယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ နောက် အဲဒီလို ဗြောက်အိုးဗောက်သံက နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကျင်းပနေကြောင်းကိုလည်း ပတ်ဝန်းကျင်က သိရှိစေပြီး ပွဲတော်ရဲ့ အငွေ့အသက်ကို ခံစားရရှိစေပါတယ်။
Posted by JulyDream at 5:07 PM2comments:
အရေးပေါ်အခြေအနေ သင်ခန်းစာပြီးတော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ထိုးခါနေပါပြီ။ ကမ့်က လူတွေလည်း ဗိုက်တွေဆာလို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ထမင်းစား ပေးမဆင်းသေးပါဘူး။ အရင်ဦးဆုံး ၀ိုင်ဒီစီမှာ အသင်းဝင်ချင်သူတွေ ရှိရင် စာရင်းပေး အသင်းဝင်ပါဆိုလို့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ စာရင်းတွေ ဖြည့်ပေးရပါတယ်။ အသင်းမှာ ကိုယ်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းကိုပါ တွဲပြီး စာရင်းပေးရပါတယ်။ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်း၊ အီးမေးလ်တွေ ပေးရပါတယ်။ စာရင်းပေးတဲ့သူ အများကြီးဆိုတော့ စောင့်နေရပါတယ်။ တချို့ကျတော့ ကိုယ့်အမည်စာရင်းပဲ ဖြည့်တာတင် မဟုတ်ဘူး သူများတွေရေးထားတဲ့ လိပ်စာတွေ ဖုန်းနံပါတ်တွေပါ လိုက်မှတ်နေသေးတယ်။ အများစုကတော့ စာရင်းပေးကြပါတယ်။ အိမ်ကို ပြန်မေးရမယ်ဆိုတဲ့ လူငယ်ပိုင်းတွေလောက်ပဲ စာရင်း မပေးကြတာပါ။ အသက်က ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်လည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ စာရင်းပေးပြီး အသင်းဝင်ထားလိုက်ပါတယ်။
ပုံ။ ။ အမည်စာရင်း ဖြည့်သွင်းနေကြစဉ်။
စာရင်းတွေ ပေးပြီးတော့ ကမ့်က တာဝန်ရှိသူတွေက သင်ခန်းစာတွေကို အနှစ်ချုပ် ပြန်ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရွေးခိုင်းပါတယ်။ သူတို့က အဖွဲ့ကို ပြန်လည် စုစည်းဖို့ တာဝန်ယူရပါတယ်။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီက လူတွေကို အဖွဲ့က မရွေးရပဲ တခြား ၃ ဖွဲ့က ရွေးပေးရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ ၄ ကို ရွေးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်ကို ၃ ဖွဲ့စလုံးကို ရွေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်က အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ အချိန်ပြည့် တာဝန်မယူနိုင်သေးကြောင်း ကမ့်ကြီးကြပ်သူကို ပြောပြပြီး အဖွဲ့ထဲက နောက်ထပ်တစ်ယောက် ထပ်ရွေးဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကလေးစုံတွဲက ကောင်လေးကိုပဲ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ရွေးလိုက်ပါတယ်။
ပုံ။ ။ သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ် ပေးအပ်စဉ်။
အဖွဲ့လိုက် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရွေးပြီးတော့ သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ် ပေးအပ်ပါတယ်။ မန်နေဂျာ အီလင်းက သင်တန်းသား တစ်ဦးချင်းကို အောင်လက်မှတ် ပေးပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေလည်း ရိုက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေက ၀ိုင်ဒီစီ ၀ဘ်ဆိုဒ်မှာ အခုအချိန်အထိ မတင်ထားသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့် ကင်မရာလေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေ ရှိလို့သာ တော်သေးတာပေါ့။ အောင်လက်မှတ် ပေးပြီးတော့ ကမ့်ကြီးကြပ်သူက ကမ့်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖို့ တာဝန်တွေ ခွဲဝေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ကန်တင်းနဲ့ မီးဖိုချောင်ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေက အပေါ်ထပ်က အိမ်သာတွေနဲ့ အိပ်ခန်းတွေကို အသီးသီး တာဝန်ယူရပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ခင် ကိုယ့်အထုပ်အပိုးတွေကို ထုပ်ပိုးထားဖို့ ကြိုမှာပါတယ်။ ကုတင်ပေါ်က မွေ့ရာနဲ့ ခေါင်းအုံးတွေကိုလည်း စနစ်တကျ ထုပ်ပိုး သိမ်းဆည်းပေးရပါတယ်။ ပြီးတော့ တာဝန်ကျရာမှာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြပါတယ်။
ပုံ။ ။ အော်တိုလေးတွေ ရေးပြီး အမှတ်တရ။
အားလုံး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီး ခဏနားပြီးတော့မှ နေ့လည်စာ ထမင်းကို ကျွေးပါတယ်။ အများစုကတော့ ထမင်းမစားနိုင်ကြပဲ အချင်းချင်း အော်တိုရေးနေတာနဲ့ အလုပ်များနေကြပါတယ်။ အသင်းခေါင်းဆောင် ရောက်မလာသေးတော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က အစကတော့ ဘာမှ မရေးကြပါဘူး။ နောက်မှ ရောက်လာတဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်က သူရေးလာတဲ့ အော်တိုစာရွက်တွေကို အဖွဲ့က တစ်ယောက်စီ ဝေငှပါတယ်။ တစ်ယောက်စီရဲ့ စာရွက်မှာပဲ ကျန်တဲ့လူတွေက ၀ိုင်းဖြည့်ပြီး ရေးကြတာပေါ့။ ထမင်းစားလိုက် စာရေးလိုက်နဲ့ လက်ကို မလည်ပါဘူး။ တချို့လည်း ထမင်းကို မစားတော့ပဲ စာကြီးပဲ လိမ့်ရေးနေကြပါတယ်။ နေ့လည်စာ စားပြီးတဲ့အခါ ဘူတာရုံကို ပြန်ပို့မယ့် ဘတ်စ်ကားက အဆင်သင့် စောင့်နေပါပြီ။ ထမင်းစားတဲ့သူတွေက စာရေးနေလို့ စားလို့ မပြီးသေးကြပါဘူး။ မနည်းဆော်သြယူမှာ အမြန်လက်စသပ်ပြီး ထမင်းစားပွဲတွေကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါတယ်။ အမှိုက်ထုပ်ကို သွားပစ်တဲ့လူက ပစ်ကြပေါ့။ အားလုံးပြီးတော့ ကမ့်တစ်ခုလုံး ဓါတ်ပုံစုရိုက်ကြပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ အထုပ်တွေဆွဲပြီး အိမ်ပြန်ခရီးကို စတင်ကြပါတော့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၇ အတွက် လူငယ်ကမ့်တစ်ခု ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု အပြည့် အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
Posted by JulyDream at 2:48 PM No comments:
တတိယနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ အဖွဲ့ ၃ ခေါင်းဆောင် ဒဲရစ်က မနက် ၇ နာရီကတည်းက သူ့လူတွေနဲ့ အဖွဲ့လိုက် အိပ်ရာနိုးတဲ့သီချင်းကို သံပြိုင်အော်နေကြပါတယ်။ မနေ့ညက စကားပြော ကောင်းပြီး နောက်ကျမှ အိပ်ရာဝင်တဲ့ လူတွေလည်း နားကို ခေါင်းအုပ်ဖိပြီး အတင်းဇွတ်အိပ်ပေမယ့် ထပါတော့ ထပါတော့ လို့ သံပြိုင်အော်နေတဲ့ အသံတွေကို ကြာတော့လည်း မခံနိုင်ပါဘူး။ အသီးသီး အိပ်ရာကနေ ထလာကြပါတယ်။ မနေ့ညက အစောဆုံး အိပ်ရာဝင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့တွေ အောက်ထပ်မှာ စ အော်ကတည်းက အိပ်ရာထလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မျက်နှာသစ် ကိုယ်လက် သန့်စင်ပြီး အောက်ထပ်မှာ မနက်စာ စားဖို့ ဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။
မနက်စာ စားပြီးတော့ နံနက် ၉ နာရီမှာ သင်တန်းစပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ သင်တန်းဆရာက ဒဲရစ် ပါ။ သူက စင်္ကာပူကြက်ခြေနီက ၀န်ထမ်းတစ်ဦးပါ။ သူ့က ရှေးဦးပြုစုနည်းတွေ အကြောင်း သင်ပြပါတယ်။ ရှေးဦးပြုစုသူတွေ လိုက်နာရမယ့် အချက်တွေကို အရင်ရှင်းပြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒဏ်ရာပြုစုခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်း၊ ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း၊ သွေးယိုထွက်ခြင်း၊ အရိုးကျိုးခြင်း၊ အဆိပ်မိခြင်း စတာတွေကို ဘယ်လိုပြုစုရမယ်ဆိုတဲ့ ပြုစုနည်းတွေကို တစ်ဆင့်ခြင်း ပြောပြပါတယ်။ ပြီးတော့ ပတ်တီးစည်းနည်းတွေကို လက်တွေ့ပြပါတယ်။ သင်ခန်းစာတိုင်းမှာ မရှင်းတာတွေ ရှိရင် ပြန်မေးခိုင်းပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြန်ဖြေပေးပါတယ်။ အခုသင်ခန်းစာမှာ သူပြောသွားတာတွေက အတိုချုံးဖြစ်တဲ့အတွက် စနစ်တကျ အသေးစိတ် ထပ်မံလေ့လာသင့်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် စကာင်္ပူကြက်ခြေနီမှာ ရှေးဦးပြုစုနည်း သင်တန်းကို လာရောက် သင်ယူသင့်ကြောင်းကို နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ ပြောသွားပါသေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ မနက် ၁၀ နာရီခွဲသွားပြီး ကော်ဖီသောက်ချိန် ခဏအနားပေးပါတယ်။
ပုံ။ ။ အရေးပေါ် အခြေအနေမှာ သွေးလှူဒါန်းမှု စီမံခန့်ခွဲပုံကို လေ့ကျင့်စဉ်။
ကော်ဖီသောက်ပြီး ပြန်တက်လာတော့ သွေးလှူရှင် ရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့ ပရောဂျက်က မန်နေဂျာ အီလင်းက အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ သွေးလှူဒါန်းတဲ့ လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘယ်လိုဘယ်ပုံ လုပ်ရမလဲဆိုတာ သင်ကြား ပြသပါတယ်။ သွေးလှူရှင်ကို ဘယ်လို ရွေးချယ်မလဲ၊ သွေးလှူဒါန်းနိုင်အောင် ဘယ်လို စီစဉ်မလဲ၊ သွေးလှူရှင်ကို ဘယ်လို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြန်ပေးမလဲ စတာတွေကို ရှင်းပြပါတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ သွေးလှူရှင် အယောင်ဆောင်ပြီး လူအုပ်ကြီးထဲမှာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မယ့် အကြမ်းဖက်မှုတွေကို သတိထားသင့်ကြောင့် စောင့်ကြည့်နေသင့်ကြောင်း ပြောပြပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ အရေးပေါ် အခြေအနေမှာ သွေးလှူဒါန်းပုံကို အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ခွဲပြီး အဖွဲ့လိုက် အစမ်းလေ့ကျင့်ရပါတယ်။
ပုံ။ ။ သွေးဖောက်ထားတဲ့လက်ကို ပတ်တီးစည်းနည်း သင်ပေးနေပုံ။
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က သွေးလှူရှင်တွေကို တန်းစီစောင့်ဆိုင်းခိုင်းတဲ့ တိုကင်ပေးစနစ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးရပါတယ်။ အခြားအဖွဲ့တွေက သွေးလှူဒါန်းမှုကို မှတ်ပုံတင်တာ သွေးစစ်တာတွေ လုပ်ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ဖွဲ့က သွေးလှူပြီး အလှူရှင်ကို ပတ်တီးစီးပေးတာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးတာတွေ လုပ်ရပါတယ်။ အားလုံး အစမ်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ ကမ့်ဝင်တဲ့လူတိုင်း သွေးလှူရှင်ရဲ့ သွေးဖောက်ထားတဲ့ လက်ကို သွေးထွက်မှု မရှိအောင် စနစ်တကျ ပတ်တီးစည်းပေးပုံကို ဒဲရစ်က သင်ကြားပြသပြီး လူတိုင်း တစ်ဦးစီ ပတ်တီးစည်းနည်း လေ့ကျင့်ရပါတယ်။
Posted by JulyDream at 1:40 PM No comments:
ဆုတွေပေး ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြပြီးတော့... တီရှပ်ဆုရတဲ့အဖွဲ့က လူတွေကလည်း တီရှပ်တွေ ထုတ်ဝတ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တော့ တစ်ဖွဲ့လုံး အနီရောင်လေးနဲ့ ကြည့်လို့အတော်ကောင်းတယ်။ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် စင်္ကာပူက တိုးပါးရိုးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာဆုတောင်းပွဲကိုတောင် သတိရသွားသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့က လက်ပတ်နာရီလေးတွေ ရတာဆိုတော့ ထုတ်ဝတ်မနေကြတော့ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ အားလုံးကို အိတ်တစ်ခုမှာ စုသိမ်းထားလိုက်တယ်။ ညပိုင်းမှာ ဂိမ်းတွေဆော့ဖို့ ရှိသေးတာကိုး။ ညပိုင်းဂိမ်းက ၃ ပွဲ ဆော့ရပါတယ်။ တစ်ပွဲက သွေးနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ သိသင့်တဲ့အရာတွေကို မေးခွန်းလွှာတွေပေးပြီး အဖွဲ့လိုက် ကွက်လပ်ဖြည့်ခိုင်းတာပါ။ အဲဒီပွဲတွေက အမှတ်မယူတော့ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကစားခဲ့ကြတယ်။ ဂိမ်းတွေဆော့ပြီးတော့ သွေးနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ မေးခွန်းလွှာတွေကို ကမ့်ကြီးကြပ်ရေးမှုးက အဖြေတိုက်ပေးပါတယ်။ မေးခွန်းလွှာတွေကို အဖြေမတိုက်ခင်ကတည်းက အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ပြောပြလို့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ကြိုသိထားတာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အခုလို ကွင်းထဲမှာ အားလုံးကို စုပြီး ထိုင်ထားခိုင်းချိန်မှာ ရေပက်မယ် ဆိုတာကိုပါပဲ။
ပုံ။ ။ ညကြီးမိုးချုပ် ရေသဘင်ပွဲ ဆင်နွဲနေကြပုံ။
ကျွန်တော်မှာက ကင်မရာပါနေတော့ ကင်မရာ ရေစိုမှာ စိုးတာနဲ့ အပေါ်ထပ်ကို ခဏတက်ပြီး ကင်မရာ သွားထားဖို့ လုပ်ပါတယ်။ အပေါ်ထပ်က သံဘာဂျာတံခါးတွေက အကုန်ပိတ်ထားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကင်မရာကို သိမ်းထားပေးဖို့ အပေါ်ထပ်ကော်ရီဒါက တစ်ယောက်ကို တံခါးကြားကနေ ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ သူက အောက်မှာ ပြန်သွားထိုင်ပေးဖို့နဲ့ ဘယ်သူကိုမှ မပြောဖို့ မှာလိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ အောက်မှာ ပုံမပျက် ပြန်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ အပေါ်မှာ ရေပက်ကစားဖို့ ပြင်ဆင်နေပုံက တကယ့်တိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုကို ဆင်နွဲတော့မလိုပါပဲ။ မြန်မာပြည်က ရေပူပေါင်းလို့ ရေအထုပ်တွေက ကော်ရီဒါတစ်လျှောက်မှာ အများကြီး ချထားပြီးသား။ ရေပိုက်တွေကလည်း အဆင်သင့် သွယ်ထားပြီးပြီ။ အောက်မှာလည်း ဟိုနားတစ်စု ဒီနားတစ်စု ရေထုပ်တွေနဲ့ နေရာယူနေကြပြီ။ ကွင်းအလည်မှာ ထိုင်နေတဲ့သူတွေကတော့ ဘာမှမသိရှာကြဘူး။ အပေါ်ကကြည့်ရင် အတိုင်းသား မြင်နေရလို့သာ ဘယ်လိုနေရာယူလဲ ဆိုတာ သိကြတာ။ မေးခွန်းလွှာကို အဖြေတိုက်ပြီးတာနဲ့ လက်ခုပ်တွေ တီးကြပါလေရော။ မကြာပါဘူး လက်ပစ်ဗုံးတွေ ပစ်သလို ရေထုပ်တွေ တစ်ထုပ်ပြီး တစ်ထုပ် စည်းဝိုင်းထဲကို ၀င်လာကြပါလေရော။ အဲဒီတော့မှ ထပြေးကြ ပြုကြ လုပ်ပေမယ့် အတော်လေးကို ရွှဲကုန်ကြပါပြီ။ အပေါ်က ရေပိုက်တွေကလည်း သင်္ကြန်ကျတဲ့အတိုင်း ဟိုလူ့ကို ထိုး ဒီလူ့ကို ထိုး တရစပ်ကို ရေတွေရွဲအောင် ပက်ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ရေခွက်တွေ ရေပုံးတွေယူပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရေပက်ကစားကြတာ ည ၁၀ နာရီထိ ထိုးသွားပါတယ်။ ကမ့်တစ်ခုလုံးလည်း အော်ဟစ်ဆူညံ ပွက်လောကို ရိုက်နေတော့တာပါပဲ။
ပုံ။ ။ မီးပန်းတွေဖောက်ပြီး မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေစဉ်။
ရေသဘင်ပွဲပြီးတော့ အားလုံး ရေမိုးချိုးကြပါတယ်။ တချို့က ပွဲမပြီးခင်ကတည်း အပေါ်ထပ်တက်ပြီး ရေမိုးချိုးနေကြပြီ။ အဲဒါနဲ့ ကျန်တဲ့လူတွေလည်း ရေချိုးခန်း အားတာနဲ့ ၀င်ချိုးကြပေါ့။ ရေချိုးလို့ ပြီးတော့ တစ်ယောက်က လာအကြောင်းကြားပါတယ်။ ဒီနေ့ ကမ့်ထဲမှာ မွေးနေ့ပွဲ တစ်ခုရှိလို့ အ၀တ်စားလဲပြီးရင် ကန်တင်းကို ဆင်းလာခဲ့ပါတဲ့။ ဒါပေမယ့် မွေးနေ့ရှင်ကို အံသြသင့်အောင် လုပ်မှာဖြစ်လို့ အသံတွေ မထွက်ကြပါနဲ့တဲ့။ အဲဒါနဲ့ အတော်များများ ရေမိုးချိုး အ၀တ်စားလဲပြီး အောက်ကို ဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ အောက်မှာ ပူဖောင်းတွေ မှုတ်ပြီးချည်.. မီးပန်းတွေ လက်ထဲမှာ အဆင်သင့်ကိုင်ထားပြီး အသင့်အနေအထားနဲ့ စောင့်နေကြပါတယ်။ မွေးနေ့ကိတ်မုန့်ကြီးလည်း ဖယောင်းတိုင်တွေ စိုက်ထားပြီး စားပွဲပေါ်မှာ တင်လို့ပေါ့။ အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ အောက်ထပ်ကန်တင်းတစ်ခုလုံးကို မီးအမှောင်ချလိုက်ပါတယ်။ မွေးနေ့ရှင်ကို သူ့ညီမငယ်က သွားခေါ်လာပါတယ်။ ဟိုတစ်ယောက်က ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ ပါလာရတာပေါ့။ အောက်ရောက်တော့လည်း လူတွေတော့ တွေ့တယ်... မီးမှောင်နေတာနဲ့ ဘာမှ မသဲကွဲဘူးလေ။ စားပွဲနား ရောက်လာတော့မှ မီးပန်းတွေ ဖောက်ပြီး ကြိုဆိုကြတယ်။ ဖယောင်းတိုင်လည်း မီးထွန်းလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ သူ့မွေးနေ့ကို လုပ်ပေးမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ မွေးနေ့သီချင်းတွေ သီဆိုကြပြီး ဖယောင်းတိုင်ကို မီးမှုတ်... ကိတ်မုန့်ကြီးကို ခွဲစားကြပါတော့တယ်။ ကိတ်မုန့်အပြင် ကန်တင်းမှာက မုန့်တွေ အအေးတွေ အစုံလုပ်ပေးထားတော့ ညလည်စာကို ထပ်စားကြရတာပေါ့။ ကမ့်ရဲ့ နောက်ဆုံးည ဖြစ်လေတော့ လူငယ်အများစုကတော့ အောက်ထပ်မှာ အုပ်စုလိုက် စကားဖောင်ဖွဲ့နေကြပါတယ်။ အဲဒီပွဲလေးပြီးတော့ ည ၁ နာရီ ထိုးနေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း အပေါ်ထပ်ကို တက်လာပြီး အိပ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။။ အတော်လေးကို ပင်ပန်းနေပြီဖြစ်တဲ့ တချို့တလေသာ အိပ်ရာဝင်ကြတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဇရာက စကားပြောနေတော့ အိပ်ရာဝင်ကို ၀င်မှ ရတော့မှာမို့လို့ အိပ်ရာ ၀င်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ လူငယ်ကမ့် ၂၀၀၇ ရဲ့ ဒုတိယနေ့တစ်နေ့ ကုန်ဆုံးခဲ့ပြန်ပါပြီ။
ကော်ဖီသောက်ပြီး ပြန်တက်လာတော့ မော်ဂျူး ၃ ရဲ့ နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ အချိန်ပါ။ ဒီနေ့အတွက်လည်း နောက်ဆုံးအချိန်ပါပဲ။ ရှေ့မှာ မော်ဂျူး ၃ ရဲ့ သင်ခန်းစာတွေက လုပ်ပြီးပါပြီ။ Blood Driveတစ်ခုကို ဘယ်လို စီစဉ်မလဲဆိုတာကို ပြောပြပါတယ်။ ဘယ်လို ပန်းတိုင်တွေ ထားမလဲ၊ ဘယ်သူတွေကို ရည်ရွယ်လဲ၊ ဘာတွေလုပ်မလဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ဘယ်သူက ဘယ်လို တာဝန်ယူမလဲ၊ ဘယ်လောက် ကုန်ကျမလဲ၊ အချိန်ဘယ်လောက် လိုအပ်လဲ စတာတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။ ပြီးရင် တကယ် စ လုပ်ကြပါ။ စောင့်ကြည့်လေ့လာပါ။ ပွဲပြီးသွားရင် အောင်မြင်မှုကို အကဲဖြတ်ပါ။ အဲဒါလေးတွေ ဆွေးနွေးပြီးတော့ ဆရာမက ၂၀၀၈ အောက်တိုဘာမှာ လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ပွဲတစ်ပွဲကို အစအဆုံး စီစဉ် စဉ်းစားခိုင်းပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီကို မလုပ်ခိုင်းတော့ပဲ အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့စလုံးကို ရောသမမွှေပြီး အဖွဲ့အသစ် ၃ ဖွဲ့ ဖွဲ့ပေးလိုက်ပြီး စဉ်းစားခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ဖွဲ့စီက ပြန်လည် တင်ပြရတော့တာပေါ့။ အဲဒါလေးပြီးတော့ ညနေ ၅ နာရီရှိနေပါပြီ။ ဒါနဲ့ ရေမိုးချိုးဖို့ အနားယူဖို့ သင်တန်းဖြုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ဒီည အစီအစဉ်တစ်ခုရှိတယ်.. ရေမိုးချိုးလည်း အလကားပဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖွဲ့လုံး မျက်နှာသစ် ခြေလက်ဆေးတာလောက်ပဲ လုပ်ထားကြတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်ပိုမှာ ဒီညမှာ အဖွဲ့လိုက်ကပြရမယ့် ပြဇာတ်အတွက် ပြဇာတ်တိုက်ဖို့ အသည်းအသန် လုပ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က အိမ်မက်မက်သူများလို့ ပေးထားတော့ ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီဖြစ်အောင် ပြဇာတ်ကိုလည်း အိမ်မက်လေးနဲ့ပဲ အကောင်အထည်ဖော်ပါတယ်။ အရက်သမား ကားသမားတစ်ယောက် သတိသံဝေဂ ရသွားတဲ့အကြောင်း အိမ်မက်လေးပေါ့။ ကျွန်တော့်က အရက်သမား ကားသမား အိမ်မက်မက်နေသူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ အရမ်းသက်သာတာပဲ... အိပ်ပြနေရုံပဲလေ။ အိမ်မက်က လန့်အနိုးမှာ စကားလေး ၂ ခွန်း ၃ ခွန်းလောက်ပဲ ပြောပြီး ပြန်အိပ်ပျော်သွားပုံလေး လုပ်ပြရတာ။ ကျန်တဲ့သူတွေက အရက်မူး ကားသမားတစ်ယောက် (မလေးကောင်လေး)၊ တက်တက်ကြွကြွ လူငယ်လေး (ကလေးစုံတွဲက ကောင်လေး)၊ လူငယ်လေးရဲ့ ရည်စား (ကလေးစုံတွဲက ကောင်မလေး)၊ အဖေ (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)၊ အမေ (ဒုတိယ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)၊ ညီမ (တရုတ်လူမျိုး ကောင်မလေး)၊ ဆရာဝန် (ကာစတန်က မလေးလူမျိုး ညီငယ်)၊ နပ်စ်မ (အသားဖြူဖြူ အရပ်ရှည်တဲ့ မလေးမလေး)၊ နောက်ခံစကားပြော (ဘောင်းဘီရှည် အမြဲဝတ်တဲ့ မလေးကောင်လေး)။ အဲဒါကို နာရီဝက်လောက် ဇာတ်တိုက်လိုက်ပါတယ်။ အဖွဲ့က ကလေးတွေရဲ့ ပြောင်ချော်ချော် မျက်နှာလေးတွေက တကယ် သရုပ်ဆောင်တော့ ပီပီပြင်ပြင်ရှိတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ ပြဇာတ်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ နောက်ခံသီချင်းဖွင့်ပြီး တစ်ဖွဲ့လုံး ကပြဖို့ ဇာတ်တိုက်ကြပြန်တယ်။ သီချင်းနဲ့အတူ ညီညီညာညာ ကဖို့အတွက် အတော်လေးကို ဇာတ်တိုက်ယူလိုက်ရပါတယ်။
ကမ့်တာဝန်ခံတွေက ညစာလာစားဖို့ အပေါ်ထပ်ကို တက်လာပြီး ခဏခဏ လာခေါ်နေပေမယ့် အဖွဲ့က ပြဇာတ်ကတဲ့နေရာမှ မညီသေးတဲ့အတွက် ထမင်းဆင်းမစားနိုင်ပါဘူး။ အတော်လေး ညီသွားတော့မှ ထမင်းစားဖို့အတွက် အောက်ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။ ညစာက ဘာဘီကျူး အကင်တွေပါ။ အဲဒါနဲ့ အမြန်စားလိုက်ကြတယ်။ ညစာစားပြီးတော့ ပြဇာတ်စဖို့ ဆော်သြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ပြိုင်ပွဲအားလုံးမှာ အမှတ်အများဆုံး ရထားတဲ့အတွက် အရင်ဆုံး ကပြရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကွင်းထဲကို ထွက်ပြီး ကပြရတော့တာပေါ့ဗျာ။
ပုံ။ ။ ကျွဲပေါက်အဖွဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်။
ဇာတ်လမ်းလေးက လူငယ်လေးက ကျောင်းကို အသွားမှာ လမ်းမှာ ကားတိုက်မိပါတယ်။ ကားသမားက အရူးမူးနေပြီး ရှေးဦးပြုစုနည်းတွေကိုလည်း မတတ်ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ ဆေးရုံကို အမြန်ပို့ပါတယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ မိသားစုက လိုက်လာပြီး ငိုပွဲဝင်ကြပါတယ်။ ကားသမားကို ရန်တွေ့ကြတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ နပ်စ်မကလည်း သွေးထွက်လွန်နေတဲ့ လူနာကို သွေးသွင်းကုသဖို့ လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးရုံမှာ သွေးက မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါနဲ့ လူနာကောင်လေး သေသွားတယ်ပေါ့။ အရက်မူးနေတဲ့ ကားသမားကလည်း သွေးရဲ့ အရေးပါပုံကို နားလည်သွားပြီး အရက်သောက်နေမယ့်အစား သွေးလှူရှင် ရှာဖွေစုဆောင်းဖို့ လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီး သံဝေဂ ရသွားပုံလေးနဲ့ ဇာတ်သိမ်းထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဇာတ်သိမ်းသီချင်းလေးကို တစ်ဖွဲ့လုံး ကပြရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်း အသီးသီး ကပြသွားပါတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး ကပြခွင့် ရလိုက်တာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်း အိမ်မက် မက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကြီးပါပဲ။ မသိရင် သူတို့က ကျွန်တော်တို့ဆီကပဲ ကူးချသလို ဖြစ်ကုန်ရော။
ပုံ။ ။ ဒုတိယဆုရသွားတဲ့ ကျွဲပေါက်အဖွဲ့ ဆုယူနေစဉ်။
အဲဒါနဲ့ အဖွဲ့လိုက် ပြဇာတ်ကပြီးတဲ့အခါ ဆုပေးပွဲကို လုပ်ပါတယ်။ အားလုံး ရင်ခုန်နေကြတာပေါ့။ ရှေ့က ဂိမ်းတွေမှာ ရထားတဲ့အမှတ်တွေအရ ကျွန်တော်တို့က အမှတ်များပေမယ့် ပြဇာတ်နဲ့ အသင်းအလံ ပြိုင်ပွဲက အမှတ်တွေကလည်း အရေးကြီးတယ်လေ။ ပထမဆုက ကြက်ခြေနီနဲ့ သွေးလှူရှင်တံဆိပ်ပါတဲ့ လက်ပါတ်နာရီ အနီရောင်လေးပါ။ ဒုတိယဆုက သွေးလှူရှင်တီရှပ်ပါ။ ကျန်တဲ့ဆုက ကြက်ခြေနီတံဆိပ်ပါတဲ့ ကြွေခွက်ပါ။ ပထမဦးဆုံး ဆရာမက အဖွဲ့တွေ အားလုံး ကောင်းတဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဆုမကြေညာခင်မှာ ကိုယ်အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့အချင်းချင်းက ဘယ်အဖွဲ့ အကောင်းဆုံး ထင်လဲ ဆိုတာကို မဲပေးကြည့်ကြပါလားတဲ့။ အဖွဲ့ ၁ က အကောင်းဆုံး ထင်ရင် ကျန်တဲ့ ၃ ဖွဲ့က လက်ခုပ်တီးကြပါပေါ့။ အဲဒီလို တစ်ဖွဲ့စီကို မေးပြီး လက်ခုပ်တီးခိုင်းကြပါတယ်။ အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့လုံးက အပြန်အလှန် လက်ခုပ်တီးပေးနေကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လက်ခုပ်သံ အကျယ်ကြီးနဲ့ အကြာကြီး အတီးခံရတာ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ ၄ နဲ့ အဖွဲ့ ၃ ပါ။
အဲဒါလေး ပြီးတော့ ဆရာမက ဆုကြေညာပါတယ်။ နောက်ဆုံးကနေ ကြေညာပြီး တစ်ဖွဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ ဆုပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံး ပထမဆုနဲ့ ဒုတိယ ဆုပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဆုကြေညာဖို့ ကျန်နေတဲ့ အဖွဲ့ကလည်း အဖွဲ့ ၃ နဲ့ အဖွဲ့ ၄ ပါ။ ဆရာမက အဖွဲ့ ၄ ဆု အရင်လာယူပါလို့ ကြေညာတော့ ဒုတိယဆုပဲ ရလိုက်တယ်လို့ ထင်လိုက်ကြတယ်။ ပြီးမှ ဆရာမက အဖွဲ့ ၄ က ပထမ ဆု လာယူပါလို့ ထပ်ပြီးဖြည့်စွက် ပြောလိုက်တော့မှပဲ သြော်... ပထမဆု ရလိုက်တာပဲဆိုပြီး အတော်လေး ပျော်သွားပါတယ်။ အမှန် ဒုတိယရတဲ့အဖွဲ့ကို အရင်ပေးရမှာ မပေးဘဲ အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်သွားအောင် ရုတ်တရက် အံ့သြသွားရအောင်ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာပါ။ ပြီးတော့ ဒုတိယရတဲ့အဖွဲ့ကို ဆုပေးပါတယ်။ ဆုပေးတဲ့အချိန်မှာ အဖွဲ့လိုက် အသင်းရဲ့ အလံကြီးကို လွှင့်ပြီး ဆုယူနေတဲ့ပုံတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်။ သြော်... သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ ကြိုးစားခဲ့သလောက် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပထမဆု ရခဲ့တာဆိုတော့ အလွန့်အလွန်ကို ကျေနပ်မိပါတယ်။
Posted by JulyDream at 11:25 AM 1 comment:
နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ ဆရာမက ပြဇာတ်အတိုလေး လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ သွေးလှူရှင် ရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ သွေးလှူဒါန်းမှု လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွေ သိရှိလေ့လာပြီးသွားတဲ့အတွက် အဲဒါတွေနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ပြဇာတ်အတိုလေးကို အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီကို ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီပေးပြီး လုပ်ခိုင်းပါတယ်။
ဆရာမက ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကို သွေးလှူဖူးလား မေးတော့ ကျွန်တော်က လှူဖူးတယ်လို့ ဖြေလိုက်ခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆရာမက အနားကိုရောက်လာပြီး ရင်ဘက်မှ ချိတ်ထားတဲ့ အမည်ကဒ်ပြားကို ကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်က ထင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ကပါလို့ ဖြေလိုက်တယ်။ ဆရာမက သူမြန်မာပြည်မှာ ၂ နှစ်လောက် သွေးနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖူးတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာအမည်တွေနဲ့ ရင်းနှီးနေတာလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကို သွေးလှူတာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီလဲ မေးတော့ ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်မှာ ၇ ကြိမ်၊ စင်္ကာပူမှာ သုံးကြိမ်ရှိပြီလို့ ဖြေလိုက်တယ်။ သူက အဲဒါဆို ပုံမှန်လှူဒါန်းနေတဲ့ သွေးလှူရှင်ပေါ့ ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကို ပုံမှန်သွေးလှူရှင်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြဇာတ်အတိုလေး လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်း သွေးလှူရှင်မှာ ရှိရမယ့် အရည်အချင်းတွေ၊ သွေးလှူဒါန်းမှု ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ကြုံရတာလေးတွေကို ပြဇာတ်အတိုလေးတွေ လုပ်ခိုင်းပါတယ်။
ပုံ။ ။ ပြဇာတ်အတိုအတွက် အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးနေကြပုံ။
အဲဒါနဲ့ အဖွဲ့လိုက် ပြဇာတ်တိုအတွက် အိုင်ဒီယာထုတ် စဉ်းစား ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ပုံမှန်သွေးလှူရှင်အနေနဲ့ သွေးဘဏ်က နပ်စ်တွေက ဘယ်လိုဘယ်ပုံ မှတ်မိနေပြီး နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံပုံလေးကို သွေးလှူရှင် အသစ်လေးတွေက မြင်တွေ့ပြီးနောက် အတုယူ အားကျ လေးစားနေပုံလေး တင်ပြဖို့ စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သွေးလှူရှင်ပေါ့။ အခြား အငယ် ၂ ယောက် (အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် တရုတ်လူမျိုး ကောင်မလေးနဲ့ မလေးလူမျိုးကောင်လေး) ကတော့ ပထမဆုံး စလှူတဲ့ သွေးလှူရှင်အသစ်ပေါ့။ ကျန်တဲ့သူတွေက ကျန်းမာရေးစစ်တဲ့ ဆရာဝန် (စင်္ကာပူကာစတန်က အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် မလေးလူမျိုး)၊ သွေးဖောက်ပေးတဲ့ နပ်စ်မ (အရပ်ရှည်ရှည် အသားလှတဲ့ မလေးမလေး)၊ ဟေမိုဂလိုဗင်စစ်တဲ့ နပ်စ် (ဘောင်းဘီရှည်ပဲ အမြဲဝတ်တဲ့ မလေး)၊ မှတ်ပုံတင်တဲ့ ကောင်တာမှာထိုင်တဲ့ စာရေးမ (ကလေးစုံတွဲက အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး)၊ ကန်တင်းက အကျွေးအမွေး တာဝန်ခံ (ကလေးစုံတွဲက အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ကောင်လေး) နဲ့ စကာင်္ပူကြက်ခြေနီက ဗော်လန်တီယာ (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်) ဆိုပြီး အသီးသီး သရုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
အငယ်ပိုင်းလေးတွေရဲ့ ဟာသမြောက်တဲ့ ရဲရဲရင့်ရင့် သရုပ်ဆောင်မှုတွေက ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကို တ၀ါးဝါး ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆရာဝန်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တဲ့ တစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးနေပုံ၊ သွေးပေါင်ချိန်ပုံ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမူအကျင့်တွေကို စစ်ဆေးတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးနေပုံကလည်း အူတက်အောင် ရီနေကြရပါတယ်။ သွေးလှူပြီးနောက် အကျွေးအမွေးနဲ့ ဧည့်ခံတဲ့ ကန်တင်းက စာပွဲထိုးလေးကလည်း ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေ ပါးစပ်ပိတ်လို့ မရနိုင်လောက်အောင် နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်း ပရိသတ်အားလုံး တ၀ါးဝါးဖြစ်စေအောင် အသီးသီး သရုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ နေ့လည်မှာ အိပ်ချင်ပြေ အိပ်ငိုက်ပြေစေခဲ့တဲ့ အချိန်လေးပေါ့။ ကမ့်ထဲက လူငယ်တွေရဲ့ တက်ကြွမှု သရုပ်ဆောင်နိုင်မှု ရဲရင့်ပွင့်လင်းမှုတွေကို တကယ် အားကျမိပါတယ်။
ပုံ။ ။ ပြဇာတ်အတို တင်ဆင်ကပြစဉ်။
နောက်စာသင်ချိန်တစ်ချိန်မှာတော့ သွေးလှူရှင် ရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့ ဗော်လန်တီယာတွေမှာ ရှိသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရှင်းပြဆွေးနွေးပါတယ်။ ဗော်လန်တီယာတွေဟာ ရပ်ရွာလူထုထဲမှာ သွေးလုပ်ငန်းရဲ့ အဓိက မျက်နှာစာတစ်ခုပါ။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်း အနေအထိုင် အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေဟာ အဆင့်အတန်းရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရေးအဖတ် အပြောစွမ်းရည် ကောင်းမွန်ရပါမယ်။ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရပါမယ်။ စီမံချက်တွေကို ကြိုတင် ကြံစည်ထားပြီး ဘတ်ဂျတ် ပမာဏအတွင်းမှာ အချိန်နဲ့တပြေးညီ အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမယ်။ နောက်ပြီးတော့ သွေးလှူရှင် ရှာဖွေတဲ့သူအနေနဲ့ သွေးသန့်ရနိုင်တဲ့ သင့်လျှော်တဲ့ ရပ်ရွာလူထုကိုပဲ ရွေးချယ်ပြီး သွေးလှူဖို့ စည်းရုံး လှုံ့ဆော် ပညာပေးသင့်ပါတယ်။ အတူတကွ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေ၊ ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပိတ် ပြောသွားတာကတော့ သွေးလှူရှင် ရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့ ဗော်လန်တီယာတွေဟာ အရည်အချင်းအစုံ ရှိရပါမယ်။ အချိတ်အဆက်မိမိ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်။ လူသားတွေကို ချစ်ခင်ရမယ်။ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ လူမှုရေး အလုပ်ကို မြတ်နိုးရမယ်။ အဲဒါလေး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး သင်ကြားပြီးတော့ ကော်ဖီသောက်ချိန် ၁၅ မိနစ် ပေးပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ အားလုံး ကန်တင်းရှိရာ အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာခဲ့ကြပါတော့တယ်။
Posted by JulyDream at 10:56 AM No comments:
နေ့လည်စာ စားပြီးတော့ နေ့လည်ပိုင်း သင်တန်းပြန်စပါတယ်။ ဒီတစ်ခါကျတော့ စေတနာသွေးလှူရှင်တွေ ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် လူနာအနေနဲ့ ဘာတွေ အကျိုးကျေးဇူးရလဲ... ရပ်ကွက်ကျေးရွာအနေနဲ့ ဘာတွေ အကျိုးကျေးဇူးရလဲ... ဆေးရုံတွေအနေနဲ့ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးရလဲ... သွေးလှူရှင်ကိုယ်တိုင်ရော ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးရှိလဲ ဆိုတာကို အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ကို ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပေးပြီး စဉ်းစားဆွေးနွေး တင်ပြခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ ၄ က ဆေးရုံအနေနဲ့ စဉ်းစားပေးရပါတယ်။ ဆေးရုံအနေနဲ့ သွေးပံ့ပိုးမှု ရနေတဲ့အခါ သွေးလိုအပ်တဲ့ ကုသမှုတွေအတွက် ဆရာဝန်တွေမှာ သွေးမရမှာကို စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကုသမှုကိုပဲ ပိုမိုအာရုံစိုက် အချိန်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကုသမှုတွေကို အချိန်ပေးနိုင်လို့ ဆေးရုံရဲ့ အမည်ဂုဏ်သတင်း ကျော်ဇော်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စေတနာ သွေးလှူရှင်တွေက လှူဒါန်းတာဖြစ်လို့ သွေးသန့်ရနိုင်မှုကလည်း ပိုများပါတယ်။ လူနာမှ အရေးတကြီး သွေးလိုအပ်လို့ ဆေးရုံကို လာဘ်ထိုးရတာတွေ၊ သွေးဝယ်ရတာတွေလည်း မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က အချိန်ကုန် သက်သာမှုပါပဲ။ လှူဒါန်းမှုကနေ ရထားတဲ့သွေးက ဆေးရုံမှာ ကြိုတင်ပြီး ရောဂါပိုးစစ်ဆေး ဓါတ်ခွဲပြီးသားဖြစ်တော့ လူနာလိုအပ်ချိန်မှာ အဆင်သင့်လေး သွင်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေ စာရွက်ကြီးတွေပေါ်မှာ ရေးချထားပြီး တစ်ဖွဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ အလှည့်ကျ တင်ပြပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေ ကျန်ခဲ့တာတွေ ရှိတယ်လို့ ယူဆမိရင်လည်း တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ ထောက်ပြဝေဖန်ကြပါတယ်။
ပုံ။ ။ အဖွဲ့လိုက် တင်ပြဆွေးနွေးနေပုံ။
နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ သွေးလှူဒါန်းမှု လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းပြပါတယ်။ သွေးလှူတဲ့အခါ အရင်ဦးဆုံး ကြိုတင်မေးခွန်းလွှာကို ဖြေရပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းလွှာမှာ သွေးလှူရှင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ နေထိုင်ပြုမူပုံတွေကို အမှားအမှန် မေးခွန်းပုံစံမျိုးနဲ့ မေးမြန်းထားပါတယ်။ အဲဒီဖောင်ဖြည့်ပြီးရင် ကောင်တာမှာ မှတ်ပုံတင်ရပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံသားနဲ့ ပီအာဆိုရင် သူတို့ မှတ်ပုံတင်ကဒ်တွေကို ပြရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားဆိုရင် လက်ရှိကိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နေထိုင်ခွင့်ကဒ် (အီးပီ၊ အက်စ်ပတ်စ်)နဲ့ ပတ်စ်ပို့စ်ပြရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ သွေးလှူရှင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို သိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ စစ်ဆေးမှု လုပ်ပေးပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်တွေ၊ ကိုယ်အလေးချိန်တွေ စစ်ပါတယ်။ ဖြေထားတဲ့ မေးခွန်းလွှာထဲကနေ သိချင်တာလေးတွေကို မေးမြန်းပါတယ်။ ပြီးရင် သွေးထဲမှာပါတဲ့ ဟေမိုဂလိုဗင်ဓါတ် သတ်မှတ်ချက် ပြည့်ဝမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါတယ်။ ဟေမိုဂလိုဗင် ပြည့်တယ်ဆိုရင် သွေးစလှူလို့ ရပါပြီ။ သွေးလှူတဲ့အချိန်မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်ပေးပါတယ်။ သွေးလှူဒါန်းပြီးရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို လေ့လာပါတယ်။ သွေးလှူဒါန်းပြီးရင် နေထိုင်ရမယ့် ပုံစံကို ပြောပြပေးပါတယ်။ သံဓါတ်အားတိုးဆေးတွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။ သွေးလှူဒါန်းပြီးတဲ့ လက်ကို သွေးထွက်မှု မရှိအောင် ပါတ်တီး စည်းပေးပါတယ်။ ပြီးရင် သွေးလှူဒါန်းမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါလိမ့်မယ်။ ၁၀ မိနစ်လောက် ကုတင်ပေါ်မှာ နားပြီးရင် တည်ခင်းဧည့်ခံတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ကန်တင်းမှာ သွားစားလို့ရပါတယ်။ မိုင်လိုနဲ့ မုန့်တစ်ခု အမြဲကျွေးပါတယ်။ နောက် ၃ လ ပြည့်တဲ့ အခါကျရင် သွေးပြန်လာလှူပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေက သွေးဘဏ်မှာ သွေးသွားလှူရင် ဖြတ်သန်းရမယ့် အဆင့်တွေပါ။
အဲဒီမှာ အဓိကအချက်အနေနဲ့ ပြောသွားတာလေးက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်က ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ သိမှတ်ထားပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပါ။ အဲဒါလေးက Hospitality not hospital culture ပါ။ သွေးလှူရှင်ဆိုတဲ့ ကျန်းမာတဲ့ စေတနာရှင်ပါ။ ဆေးရုံလာတက်တဲ့ လူနာ မဟုတ်ပါဘူး။ သွေးလှူရှင်ဆိုတာ ဆေးရုံတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ ကာစတာမာပါ။ အကောင်းဆုံး ဧည့်ဝတ်ကျေ>ပန်တဲ့ ကာစတာမာ ဆက်ဆံရေးက သွေးလှူရှင်တွေ နောက်ထပ်တစ်ခါ လှူဒါန်းချင်အောင် ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ မြန်မာပြည်က တချို့ဆေးရုံမှာဆိုရင် သွေးလှူရှင်တွေက အော်ခံဟောက်ခံရပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ ထိုင်စရာနေရာ မပေးတဲ့အပြင် မျက်စိနောက် လူရှုပ်တယ်ဆိုပြီး အခန်းအပြင်ထွက်ခိုင်းလို့ အပြင်မှာပဲ မတ်တပ်ရပ်ပြီး သွေးလှူဖို့ စောင့်နေရပါတယ်။ တချို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မျက်နှာထားကလဲ အမှန်အကန်ကို တင်းပါတယ်။ သွေးလှူပြီးရင် ဂရုစိုက်မှု ပညာပေးမှုကလည်း မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ သွေးလှူဒါန်းဖူးတဲ့ ၀ါရင့်သွေးလှူရှင်တွေနဲ့ကြုံရင် သူတို့က သွေးလှူရှင်အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီတဲ့အနေနဲ့ ပြောပြကြပါတယ်။ ကျွေးမွေးဧည့်ခံတယ် ဆိုတာကတော့ ဝေလာဝေးပါပဲ။ ဥပမာ ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးဆေးရုံပေါ့။ သွေးလာလှူတဲ့သူနဲ့ သွေးရောင်းတဲ့သူ အများကြီး ကွာခြားပါတယ်။ သွေးရောင်းတဲ့ ငါးခုံးမတွေ ရှိလို့ သွေးလှူရှင်တွေကို အခုလို ပြုမှုဆက်ဆံနေတာပါလို့ ဆင်ခြင်ပေးရင်လည်း လက်ခံပေးလို့ မရပါဘူး။
တကယ်တော့ အဲဒီလို ညံ့ဖျင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေက လူနာရှင်တွေရော သွေးလှူရှင်တွေရော စိတ်ထိခိုက်ရ စိတ်ပင်ပန်းရပါတယ်။ စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေလို့သာ ပြသနာမတက်တာပါ။ စေတနာ သွေးလှူရှင်ဆိုတာ လူနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူတို့တွေ နားမလည်သေးသရွှေ့ ဆေးလောကမှာ ကျင်လည်ဖို့ ရှိနေဖို့ မကောင်းပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို အကျင့်ဆိုးတွေကို ပြုပြင်သင့်နေပါပြီ ခင်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 9:32 AM No comments:
Posted by JulyDream at 7:50 PM No comments:
Posted by JulyDream at 1:32 PM 1 comment:
naeydkif;rSm a&rdk;csdK;NyD; vlpHkwJhtcg tzGJUoDcsif;twGuf ZmwfwdkufMuygw,f/ 'geJU vl&Sif;wJh ae&mjzpfwJh urfhtaqmuftOD;&JU t0ifaygufbufudk xGufvmcJhMuw,f/ yxrOD;qHk; tzGJUoDcsif;udk b,fvdk oDzGJUrvJaygh/ aemuf aw;o&kyfazmfudk b,fvdk vkyfrvJaygh/ oDcsif;udk t*Fvdyfqkd&rSm qkdawmhvnf; t*FvdyfoDcsif;awG em;&nfr0xm;wJh uRefawmf ab;xdkifae&wmaygh/ ajymorQ em;axmif acgif;ndwftqifheJU yl;aygif; yg0ifcJhygw,f/ oDcsif;zGJUNyD;awmh oHpOf&SmMuygw,f/ oHpOfqdkwmvnf; yg;pyf oHpOfyg/ NyD;awmh tJ'DoDcsif;udk tzGJUvdkuf b,fvdk ujyMurvJqdkNyD; ZmwfwdkufMuygw,f/ Zmwfwdkufwmuvnf; tcsdef tawmfMumygw,f/ b,fpmom;a&muf&if b,folawGu b,fvdk ckef0ifvm... b,folu b,fvdk vkyfNyD; jyefckefxGuf... pnf;csufnDatmif renf; &SmazG,lae&ygw,f/ Adkufuvnf; tawmfav;udk qmaeNyDav/ Zmwfwdkufaewkef; urfhuefwif;u xrif;pm;zkdU vmac:ygw,f/ tJ'geJUyJ tzGJUom;tm;vHk; tm;&yg;& xrif;pm;Muygw,f/ wpfaeukef yifyef;xm;NyD; Adkufqmaeawmh pm;vdkU aumif;vdkufwmAsm/ pm;NyD;awmh xHk;pHtwdkif; pm;yGJudk oefU&Sif;a&; vkyfMuaygh/
yHk/ /tzGJU4&JU oDcsif;twGuf ZmwfwdkufaepOf/
xrif;pm;NyD;awmh taqmif&JU av;xyfrSm Youth Donor Club u olwdkUtzGJUtaMumif;udk Power Point Slide Show eJU &Sif;jyygw,f/ nydkif;rSm uifr&m ,lrxm;rdawmh "gwfyHkawG r&dkufxm;rdvkdufbl;/ Youth Donor Club u puFmylMuufajceD&JU Blood Donor Recruitment Programme t& zGJUpnf;xm;wJh vli,ftzGJUyg/ March42006 rSmpwif zGJUpnf;cJhygw,f/ touf 16 ESpfuae 25 ESpfMum; vli,fawGudk t"du tm;jyKxm;ygw,f/ vkyfief;e,fy,faygif;pHk (EdkifiH0efxrf;? jyifytvkyf? aumvdyf? ausmif;) u vli,fawG yl;aygif; yg0ifxm;Muygw,f/ olwdkUawGu bmvkyfMuvJ qkdawmh pHowfrSwfcsuf5ckeJU pHjyvli,fjzpfatmif aexdkifMuygw,f/
pHtrSwf 1 t& tzGJU0ifawG[m tcaMu;aiG r,lwJh apwemaoG;vSL&Sif jzpf&ygr,f/ tenf;qHk; 1 ESpfrSm2cg aoG;vSLay;&ygr,f/ aoG;vSL'gef;jcif;eJU ygwfowfNyD; todynm jzefUa0olawG jzpf&ygr,f/
pHtrSwf2t& &yf&GmtwGif;rSm aoG;vSL'gef;jcif;udk apwemtavQmuf tcaMu;aiG r,laom aoG;vSL'gef;rIawG jzpfatmif OD;aqmif pnf;&Hk;vHIUaqmf ynmay;&ygr,f/
pHtrSwf3t& aoG;bPfrSm aoG;vdktyfcsuf r&dS&avatmif jynfUpHkvHkavmufatmif pdwfcs&wJh aoG;oefU aoG;vSL&Sifrsm;udk wajy;nD &SmazG pnf;&Hk;ay;&ygr,f/ aoG;rSwqifh ul;pufwwfwJh a&m*gawG &dSaeEdkifaom vdiftrltusifh &dSolawGqDu aoG;r,ljzpfatmif owdxm; qifjcif&ygr,f/
pHtrSwf4t& oufwl&G,fwl tkyfpkawGrSm tcsif;csif; ynmay; pnf;&Hk;vIHaqmfol jzpf&ygr,f/ rdrdygwf0ef;usifu oli,fcsif; rdwfaqGawG (aoG;vSLzl;ola&m.. aoG;rvSLzl;ola&m..) udk trsdK;om; aoG;vSL'gef;a&; pDrHcsufrSm vlrIa&;wm0ef wpf&yftaeeJUa&m vlrIu&kPm vkyfief;wpfck taeeJUa&m yl;aygif;yg0ifzkdU zdwfac:&ygr,f/
pHtrSwf5t& aoG;vSL&SifawGudk ulnDapmifha&Smufol jzpf&ygr,f/ aoG;vSL&SifawG&JU usef;rma&; tpOftNrJ aumif;rGefaeatmif *&kpdkuf&ygr,f/ aoG;vSL'gef;NyD;aemuf yDwdjzmwJh tawGUtBuHKrsdK;jzpfatmif zefwD;ay;&ygr,f/
yHk/ /YDC &JU Role ig;ck/
pumFylrSm touf 16 ESpfuae 25 ESpfMum; vli,fawG&JU 5% uom aoG;vSL&Sifrsm; jzpfMuygw,f/ tJ'D vli,faoG;vSL&SifawGuyJ pumFylEdkifiH wpfrsdK;om;vHk;&JU aoG;vSL'gef;rIrSm 40% tjzpf yg0ifaeygw,f/ wu,fawmh tJ'Dta&twGuf[m jynfUpHkvHkavmufwJh ta&twGuf r[kwfygbl;/ vli,fawGtaeeJU vlUtoufudk u,fq,fwJhae&mrSm aoG;&JU ta&;ygrIudk *&kjyKrdrI enf;yg;ygao;w,f/ tJ'gaMumifh Youth Donor Club taeeJU tckvdk ynmay;awG urfhawGudk pDpOfaewm jzpfygw,f/ Youth Donor Club &JU &nfrSef;csufu puFmylEdkifiH&JU pdwfcs&wJh aoG;oefUvSL'gef;rIrSm 80% txd yl;aygif;yg0if yHhydk;ay;zdkUjzpfygw,f/ 'gaMumifh vli,fawGMum;rSm aoG;vSL'gef;jcif;[m vlrIa&;wm0ef wpfckudk xrf;aqmifaewm jzpfaMumif; ynmay;zdkU... vli,fawGudk 1 ESpfrSm tenf;qHk;2cg aoG;vSLay;zdkU wdkufwGef; EdI;aqmf aqmif&GufoGm;rSmyg/
“Friends, you and me… you brought another friend… and then there were three… we started our group… our circle of friends… and like that circle… there is no beginning or end.”
tJ'D &Sif;vif;yGJtNyD;rSm a&SOD;jyKpkenf;jzpfwJh CPR touf&I tm;ulenf;udk t&kyfawGeJU vufawGUjyygw,f/ &ifbufudk zdESdyf&wJh tBudrf[m 30 Budrf jzpfoGm;NyDjzpfMumif; &Sif;vif;oifjyygw,f/ oifwef;om;wdkif; enf;pepfrSefatmif avhusifh&ygw,f/ tJ'gav;NyD;awmh uefwif;rSm rkefUeJUtat;awG pDpOfxm;ay;ygw,f/ nvnfpmudk pm;NyD;&if tdyf&m0ifvdkU &ygNyDqdkwmeJU tat; qif;aomufNyD; ajcvufaq;aMum oGm;wkdufNyD; tdyf&m0ifcJhygw,f/ wcsdKUvli,fawGuawmh tdyf&m r0ifao;bJ 0g&HwmrSm pum;awG azmifzGJUaeMuwmaygh/ Z&maxmufaeNyDjzpfwJh uRefawmfuawmh waeukef yifyef;xm;vdkU n 11 em&DcGJrSm tdyf&myJ 0ifvdkufygawmhw,f/
Posted by JulyDream at 10:49 AM2comments:
aemufxyf*drf;wpfckuvnf; tcef;xJrSmyJ upm;&ygw,f/ tzGJU2zGJU NydKif&wmyg/ wpfzGJUu tcef;tvnfrSm puf0dkif;yHk0dkif;NyD; &yfae&ygw,f/ tJ'Dpuf0dkif;tvnfxJudk usefwJhwpfzGJUu tcsdefydkif;vdkuf abmvHk;awG ypfxnfU&ygw,f/ olwdkUudk tJ'DabmvHk;awGudk avxJrSmwifaeatmif ykwfxkwf&ygw,f/ abmvHk;wpfckudk wpfcgyJ ykwfxkwfcGihf &dSygw,f/ abmvHk;awG pnf;0dkif;xJrSm rsm;vmavav ykwfxkwfwJholawGu jym,mcwfavavyJav/ tzGJUvdkuf pnf;csufrnDwmeJU trQ abmvHk;awG avxJrSm enf;oGm;avygyJ/ tcsdefaphwJhtcsdefrSm abmvHk;trsm;qHk; avxJrSm wifaeatmif ykwfxkwfEdkifwJhtzGJUu tEdkif&ygw,f/ tJ'DyGJrSmvnf; vlnDwJh uRefawmfwkdUtzGJU tEdkif&ygw,f/
aemufqHk;*drf;wpfckuawmh a&cJNzdK*drf;yJ jzpfygw,f/ tzGJUwpfzGJUpDudk a&cJxkyfBuD; wpfxkyfpD ay;ygw,f/ rdepf 20 qdkwJh tcsdefwpfck owfrSwfxm;ygw,f/ tJ'Da&cJxkyfBuD;udk tzGJUom;rsm;u wpfa,mufwpfvSnfUpD yGwf&if; ta&aysmfatmif vkyf&ygw,f/ a&cJudk pm;cGifhr&dSovdk yGwfae&if; a&cJwHk; atmufudkjyKwfus&ifvnf; &HI;ygw,f/ usefwmuawmh OmPf&dSovdk vkyfcGifh&dSygw,f/ uRefawmfwkdUtzGJUu wpfa,mufwpfvSnfU yGwfwJhtjyif at;vdkU cPem;aewJh tzGJUom;awGuvnf; vufudk ylaeatmif yGwfwdkufaeMuygw,f/ NyD;&ifolwkdU vufylylBuD;eJU a&cJwHk;udk qufyGwfMuygw,f/ usefwJh tzGJUom;awGuvnf; a&cJwHk;udk yg;pyfeJU av0dkif;NyD; rIwfMuygw,f/ Mumawmh 'Da&cJwHk;vJ rcHEdkifygbl;/ jrefjref ta&aysmfusygava&m/ tJ'DyGJrSmvnf; uRefawmfwdkU tzGJUyJ tEdkif&&dSygw,f/
yHk/ /tzGJU4&JU tvHudk a&;qGJaepOf/
tJ'D*drf;NyD;awGNyD;awmh tzGJUvdkuf udk,ftzJGU&JU trnfeJU vdkufzufwJh tzGJUtvHudk a&;qGJ&ygw,f/ ydwfjzLp wpfp&,f pkwfwHtpHk? a&aq;tpHkudk ay;xm;ygw,f/ uRefawmfwdkUtzGJUu Dreamers vdkU ay;xm;awmh tvH'DZdkif;udk pOf;pm;Mu&ygw,f/ tzGJU3utrnfudk Bison vdkU ay;ygw,f/ tzGJU2uawmh Kiss vdkU ay;ygw,f/ tzGJU 1 u Dolphin vdkU trnf ay;ygw,f/ tJ'geJU uRefawmfwdkU tzGJUvnf; yHkudk p qGJMuygava&m/ olrsm;wumawGu pkwfwHeJUqGJvdkU vufawG raycJhayr,fh uRefawmfwdkUu tararG;uwnf;u ygvmwJh vufz0g;BuD;awGudk toHk;jyKNyD; yHkqGJcJhMuygw,f/ tzGJU0ifwdkif; vuf0g;wpfzufqDrSm aq;awG okwfvdrf;NyD; ydwfpay:rSm vufz0g;yHkawG qGJMuygw,f/ vufz0g;yHkawG tm;vHk;aygif;vdkuf&if toJESvHk; yHkav;aygh/ NyD;awmh tJ'D tonf;ESvHk;&JU ab;rSm aoG;pufav;3pufyHk a&;qGJygw,f/ toJESvHk;xJrSmawmh tdrfrufrufolrsm; Dreamers qdkwJhpmudk a&;xdk;xm;ygw,f/ vufz0g;wpfckpDrSmvnf; aoG;vSL'gef;wmudk tm;ay;wJh pmawGudk a&;xdk;xm;ygw,f/ vufz0g;rSm uyfaewJh aq;awGudk renf;cRwf,l&ygw,f/ qyfjymeJU cRwfay;r,fh qDaq;awG jzpfaevdkU tawmfav;udk cRwf,lae&ygw,f/ aemufqHk; urfhu wm0efcHawGu wif'gaq;awG ,lvmay;vdkU aq;awG cRwfvdkU&oGm;w,f/ EdkUr[kwf&if tJ'DvufawGeJU b,fvdk a&SUqufoGm;&rSef;udk rawG;0Hhawmhbl;/
yHk/ / YDC pmvHk;udk o&kyfazmfaepOf/
tzGJUtvHudk qGJNyD;awmh tm;vHk;udk a&rdk;csdK;zdkU tcsdefay;ygw,f/ 'DZdkif;rNyD;ao;wJholu qufqGJMuaygh/ NyD;wJholu a&csdK;Muaygh/ uRefawmfwdkUtzGJUvnf; 'DZdkif;NyD;wmeJU a&rdk;csdK;Muygw,f/ a&rdk;csdK;NyD;&if tzGJU&JU tvHeJUygwfowfwJh oDcsif;av; wdkufzdkU&dSaMumif; xrif;rpm;cifrSm wpfacgufavmuf tprf;avhusifhzdkU tzGJUacgif;aqmifu rSmygw,f/ tJ'geJU uRefawmfwdkUawG wpfaeukef aqmhupm;xm;vdkU acR;jyefeHapmfaewmudk a&rdk;csdK; oefUpifMuygw,f/ uRefawmfu a&rdk;csdK; t0wfpm;vJNyD; tzGJUu a&csdK;zkdU usefwJh olrsm;wumawGudk apmifhae&if; 0g&HwmrSm vrf;ovm;aeygw,f/ tJ'DtcsdfefrSm urfhu wm0ef&dSolawGu 0dkif'DpD YDC qdkwJhpmvHk;udk uGif;xJrSm tdyfNyD; o&kyfazmfaewmudk awGU&ygw,f/ urfhu "gwfyHkq&mawGu atmufxyfuae tay:xyfawGudk "gwfyHk&dkuf,lzdkUtwGuf ajy;wufvmMuw,f/ NyD;awmh taqmif&JU oHk;xyfuaeNyD; "gwfyHk&dkufzdkUtwGuf olwkdUudk ae&m,lzdkU nTefMum;ay;aeygw,f/ taqmif&JU oHk;xyfrSmaewJh uRefawmfvnf; uifr&mudk tcef;xJu ajy;,lNyD; "gwfyHkwpfyHkudk rSwfwrf;wif xm;vdkufygw,f/ vli,fawGyDyD aysmfaysmfyg;yg; us&mae&mrSm aq;pufxifMuwmudk awGUcJh&NyD; tm;usrdygw,f/
NyD;awmh aemuf*drf;wpfckudk upm;ygw,f/ *drf;trnfu &Gufopfyg/ tJ'D*drf; rupm;cif tzGJudk aemufxyfrefbm wpfa,muf xyfa&mufvmygw,f/ olu rav;vlrsdK; rdef;cav;yg/ ,leDAmpwDwufzdkU apmifhaewJholyg/ t&yfuawmh t&SnfBuD;/ tom;ta&uvnf; jzLazG;NyD; udk,fvHk;udk,faygufav;vnf; vSw,fAsm/ rsufESmav;uvnf; cspfp&mav;yg/ &Gufopf*drf;u wpfzGJUrSm rdk;umzsifwpfckpDudk ay;xm;ygw,f/ tJ'Drdk;umzsifay:rSm tzGJUu vltm;vHk; wufNyD;&yfae&ygw,f/ tJ'D &yfvufpBuD;eJU rdk;umzsifpudk tay:atmuf ajymif;jyefvSef&ygw,f/ ajcwaygifusdK; &yfwJhvlu &yfaygh/ wpfa,muf ajcaxmufay: wpfa,mufeif;NyD; ae&mvGwfuae tJ'D rdk;umzsifudk qGJvSef&ygw,f/ qGJvSefxm;wJh tprSm wpfzGJUvHk; jyef&yfNyD; rdk;umzsifwpfckvHk;udk ajymif;jyefvSefNyD;om; jzpfatmif vkyf&ygw,f/ tJ'Dvdk ajymif;jyefvSefaewkef;rSm ajrBuD;ay:udk ajcaxmufeif;cGifh r&dSygbl;/ yxryGJpOfrSm uRefawmfwdkU Edkifygw,f/ 'kwd,yGJrSmawmh oDtdk&DrSm;oGm;vdkU rdk;umzsifu vSefvdkUr&jzpfNyD; &IH;oGm;ygw,f/
yHk/ /abmvHk;ckHupm;enf; upm;aepOf/
'Dwpfcg*drf;u uRefawmfwdkU i,fi,fwkef;u abmvHk;cHk upm;ovdkaygh/ *dk;orm;? aemufwef;? tv,fwef;? a&SUwef;qdkNyD; wef;4wef; vkyfxm;ygw,f/2zGJUqdkawmh wef;u 8 wef;aygh/ wpfwef;pDrSm 0g;vHk;wpfacsmif;pD&dSNyD; tJ'Dwef;rSm ygwJhvlawGu 0g;vHk;udk udkifxm;NyD; ae&m,lxm;&ygw,f/ abmvHk;u olwdkUa&SU a&mufvmrS uefvkdU&ygw,f/ udk,fhae&mrSmyJ udk,fae&NyD; b,fnm ab;wdkufyJ a&TUvdkU&ygw,f/ uRefawmfeJU tzGJUacgif;aqmifu a&SUwef;rSm ae&m,l&ygw,f/ uav;pHkwGJu aemufwef;rSm/ rav;2a,muf&,f w&kwfrav;&,fu tv,fwef;rSm/ urfhu wjcm;wpfa,mufu *dk;orm; vkyfay;w,f/ uRefawmfwdkUtzGJU&JU tv,fwef;u yHhydk;rIaumif;ovdk *dk;orm;uvnf; *dk;zrf; tawmfaumif;ygw,f/ tJ'geJU a&SUwef;udk abmvHk;u cPcP a&mufvmwmeJU uRefawmfwdkUtzGJU3*dk; *dk;r&dS tEdkif&cJhygw,f/ tzGJUu a&SUwef;wkdufppfrI;awG awmfwmvJ ygvdkUayghaemf/
yHk/ /tzGJUvdkuf aeUvnfpm pm;NyD;csdef/
tJ'D*drf;NyD;awmh cPwjzKwfem;NyD; aeUvnfpm pm;Muygw,f/ aeUvnfpmudkvnf; udk,fhtzGJUeJU udk,fxdkifNyD; tzGJUu wpfOD;u tm;vHk;twGuf xrif;bl;awG? tat;bl;awGudk oGm;,l&ygw,f/ NyD;&if tzGJU0iftm;vHk;udk a0iSay;&ygw,f/ tzGJUvdkuf udk,fhaqmifyk'fawGudk rpm;cif wpfzGJUNyD;wpfzGJU tNydKiftqdkif atmfMuygw,f/ xrif;rpm;cif tzGJUvdkuf "gwfyHk&dkufMuygao;w,f/ NyD;rS xrif;p pm;Muygw,f/ xrif;u enf;enf;rmygw,f/ [if;uawmh &Hk;ywDoD;eJU i&kwfaumif;csuf ig;[if;yg/ pm;NyD;wJhtcg udk,fpm;cJhwJh pm;yGJudk udk,ftzGJUeJU oefU&Sif;a&; vkyf&ygw,f/
aemufwpfcg *drf;u tcef;xJrSm aqmh&wmyg/ jrefrmupm;enf; a&TpGefndKeJU enf;enf;qifygw,f/ olwdkUuawmh aMumifNrD;wdkvdkU trnfay;xm;wmygyJ/ wpfzGJUpDuae ESpfa,mufpD xGuf&ygw,f/ wpfa,muf&JU taemufrSm tNrD;wpfck vkyfxm;&ygw,f/ a&SUwpfa,muf tJ'D tNrD;ygwJh udk,fhtzGJUom;udk wjcm;tzGJUom;u tNrD;vmrjzKwfatmif umuG,fay;&ovdk olrsm;tzGJU&JU tNrD;udkvnf; vSrf;jzKwfEdkifatmif BudK;pm;&ygw,f/ tNrD;&dSwJhvluwnf; tcGifhom&if olrsm;tzGJJU&JU tNrD;udk qGJjzKwfcGifh &dSygw,f/ tawmfav;udk aysmfp&maumif;ygw,f/ tzGJUu vltpHk wpfwGJpDxGufNyD; upm;&ygw,f/ NyD;awmh ESpfaMumhjyefNyD; upm;&ygao;w,f/ tJ'DyGJrSm uRefawmfwdkUu5yGJ2yGJeJU tEdkif&ygw,f/
Posted by JulyDream at 10:09 PM 1 comment:
Posted by JulyDream at 10:02 PM No comments:
MuufajceDurfhtwGuf pumFylta&SUjcrf;u b'kwfblwmudk pk&yfxm;NyD; 'DZifbm 28 reuf9em&DcGJrSm ta&mufvmzdkU ajymxm;awmh reuf tdyf&mEdk;wmeJU txkyftydk;awG jyefppfNyD; um;iSm;vdkufygw,f/ &xm;eJUoGm;&if oufomEdkifayr,fh uRefawmfaewJhae&muae tJ'Dae&mtxd &xm;2qifh pD;&ygqdkawmh tcsdeft&rf;ukefrSmyg/ awmfMum pk&yfrSm rqHkrdvkdU&dS&if b,fqufoGm;&rSef; rodawmh rvGJcsifwmeJU ydkufqHyJ tukefcHvdkufygw,f/ tdrfatmufrSm um;vSrf;wm;vdkufawmh um;wpfpD; vm&yfygw,f/ tawmfaumif;wJh rmpD'D;um;jzLBuD;As/ wpfoufeJU wpfudk,f rmpD'D;um;udk wufpDtaeeJU tckrS pD;zl;wmAs/ pumFylrSm um;orm;eJU aps;ndSp&mrS rvdkawmh tqifoihfav; um;ay:wufNyD; oGm;r,fhae&mudk ajymvdkuf&HkyJav/ um;q&mudk oGm;r,fhae&m ajymNyD; xdkifcHkcg;ywf ywfxm;vdkufygw,f/ vrf;rSm &JppfvdkY cg;ywfrywfxm;&if c&D;onfyJ 'Pf&dkufcH&wmyg/ um;q&mu taeomBuD;qdkawmh c&D;onf cg;ywf rywfvnf; olwkdUu bmrS twif;tusyf ajymrSm r[kwfygbl;/
c&D;u&Snfawmh um;ay:rSm xHk;pHtwdkif; tmvl;zkwfwmaygh/ um;q&m OD;av;BuD;uvnf; tawmfav;udk oabmaumif;ygw,f/ uRefawmfudk pvHk;rSwfNyD; ajymaewmyg/ uRefawmfu &Sif;jyvdkufygw,f/ uRefawmf jrefrmjynfom;ygvkdU/ tJ'geJU pumFyla&muf jrefrmawG cHpm;&avh&dSawmh pufwifbmta&;tcif;udk aemufaMumif;vSef ajymMuqdkMujyefa&m/ bmoma&; udkif;&dIif;wJhjrefrmawGvdkU olUtaeeJU av;pm;wJhEdkifiHrSm tckvdk jzpf&yfawG jzpfoGm;wmudk tHhMordw,fwJh/ xdkif;vnf; bmoma&; udkif;&Idif;ygw,f/ bkef;BuD;awGudk OD;pm;ay; wav;wpm; qufqHygw,f/ xdkif;usawmh jrefrmrSmyJ jzpf&wm tpdk;& udkifwG,fyHkaMumihfqdkNyD; olu ajymaeygw,f/ aemufydkif;rSm pvHk;awG&JU xHk;pHtwdkif; olwkdU puFmylBuD; b,favmuf at;csrf;w,f/ na&;nwm b,favmuf vHkNcHKrI&Sdw,f/ w&m;Oya' b,fvdk pdk;rdk;w,f/ pD;yGg;a&; zGHUNzdK;wdk;wufw,f/ vlwdkif;vlwdkif; 0ifaiG&dSw,f/ puFmylNrdKUBuD; b,favmuf om,mvSyw,f/ tJ'gawG qufajymawmhwmaygh/ bmyJajymajymav olajymorQ tukefem;axmif xm;vdkufw,f/ jyefcHjiif; raeawmhbl;av/ wu,fawmh [kwfvnf; [kwfaewmudk;/ tJ'Dvdk ajym&if;qdk&if; blwmudk a&mufvmw,f/ um;cu 25 a':vm usygw,f/ wu,fh um;cu 19 a':vmygyJ/ 'gayr,fh um;usyfcsdef &Hk;csdefrSm 30 &mcdkifEIef; xyfaygif; ay;&ygw,f/ tJ'gaMumifh 25 a':vm usoGm;wmyg/ blwma&mufawmh usoifhaiGum;cudk &Sif;NyD; txkyfqGJ blwmxJudk 0ifvmcJhw,f/
yHk/ / b'kwfblwmxJrSm pkxdkifaepOf/
blwmxJa&mufawmh MuufajceDurfh 0ifr,fh wcsdKUvli,fawG a&mufaeMuygNyD/ urfhudk pDpOfaewJh vli,fawGuvnf; pm&if;awG aumuf&if; pum;ajym&if; aemufvmr,fh vlawGudk apmifhaewmaygh/ olwdkUawGuawmh pumFyl MuufajceD wHqdyfygwJh... vli,faoG;vSL&Sifuvyf wHqdyfygwJh pydkU&SyfawG 0wfxm;Muygw,f/ [dka&mufawmh trnfpm&if; ay;vdkufygw,f/ tJ'DrSm jrefrmqdkvdkU uRefawmf wpfa,mufwnf;/ olwdkUawG uRefawmftrnfudk renf;udk toHxGuf,lae&w,f/ ryDuvmav;aygh/ tJ'DvdkeJU apmifh&if;apmifh&if; reuf 10 em&DcGJrSm pk&yfuae urfh&dS&mudk xGufcGmzdkU um;wpfpD; vmBudKygw,f/ a&SUajy;um;taeeJU aoG;vSL&Sif pkaqmif;wJh MuufajceDum;av;u t&ifvmvdkUaygh/ olUaemufurS c&D;onfwifum;BuD; vdkufvmw,f/ tJ'geJU tm;vHk; um;ay:wuf vla&wGufNyD; xGufvmcJhMuygw,f/
yHk/ / uGif;xJrSm cPae&m,l xdkifaepOf/
reuf 10 em&D 40 rdepfrSm urhfudka&mufawmh txkyfawGqGJNyD; uGif;xJrSm cPae&m ,lcdkif;ygw,f/ urfhBuD;Muyfa&;rI;u urfh&JUpnf;urf;awGudk zwfjyygw,f/ urfhtjyifudk xGufcGifhr&dSwJhtaMumif;/ aq;vdyf aomufwwfolrsm; owfrSwfcsdefrSm owfrSwfae&mrSmyJ aomufcGihf&dSrSmjzpfaMumif;? urfh&JUoefU&Sif;udk 0dkif;vkyf&rSmjzpfaMumif; pwmawGudk &Sif;jyygw,f/ NyD;awmh a,musfm;av;awGtwGuf tcef;wpfcef;? rdef;cav;awGtwGuf tcef;wpfcef;pD owfrSwfay;ygw,f/ tdrfomawGudkvnf; cGJjcm;owfrSwf ay;ygw,f/ taqmif&JU3xyfu tdrfomu a,musmf;av;awGtwGuf?2xyfeJU4xyfu tdrfomawGu rdef;cav;awGtwGufyg/ tcef;xJrSm tdyf&mcif;awG txkyftydk;awGudk ae&mcsNyD;&if atmufu uGif;xJudk 15 rdepftwGif; jyefqif;vmzdkU wcgwnf; rSmvdkufygw,f/
yHk/ / urhfpnf;urf;csufrsm; zwfjyaepOf/
tcef;xJa&mufawmh ukwifawGu2xyfukwifawGyg/ tcef;axmifhu ukwifwpfckrS ae&m,lvdkufNyD; arGU&mawG acgif;tHk;awG ae&mcsygw,f/ ukwifatmufxyfudkyJ ae&m,layr,fh tay:xyfrSm aer,fhol r&dSvdkU wpfa,mufwnf; vGwfvGwfvyfvyf aecJh&wmaygh/ wcsdKUawGuawmh t0wftpm;awG vJvdkUayhg/ trsm;pkuawmh vGwfvGwfvyfvyf yHkpH0wfpm;xm;w,f/ tm;upm; abmif;bDwdkawGeJUaygh/ uRefawmfom &Hk;wuft0wftpm;eJU olwdkUawGMum;rSm awmom;NrdKUwuf tlaMumifMum; jzpfae&w,f/ urfhudk wm0ef,lxm;wJh vli,fawGuawmif bmjzpfvdkU 'Dvdk0wfxm;wmvJwJh/ *drf;awGupm;rSmjzpfvdkU abmif;bDwdkeJU aevdkU&w,favwJh/ cufwmu 'Dtouft&G,ftxd abmif;bDwdkudk vlMum;xJ txl;ojzihf rdef;cav;awGa&SUrSm r0wf&Jbl;jzpfaeawmh &Hk;wufwJhabmif;bD&SnfeJUyJ qufaevdkufw,f/ uRefawmfvkdUyJ abmif;bDwdkeJU raewwfwJh rav;vlrsdK; pvHk;EdkifiHom; vli,f 1 a,mufvnf; &dSawmh tazmf&oGm;w,f/ [l;... awmfao;yg&JU/
Posted by JulyDream at 8:03 PM No comments: